MYANMARTHWAY BLOG: October 2010
ကြည်ညိုဖွယ်ရာ မြတ်သာသနာ - ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ္လ
အခုဖော်ပြမယ့်ပို့စ်ဟာ စာအုပ်ထဲက ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓမ္မစေတီဆရာတော်ရဲ့ တရားခွေတွေကို နာကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့တဲ့ မှတ်စုလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေငှတာပါ။ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ဟာ ဆရာတော်ဦးကောသလ္လဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားခွေရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် တစ်ခုခု အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်မှတ်ထားသလိုပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၁ မိနစ်) မှာ ဗီစီဒီခွေနဲ့ နာယူမှတ်သားခဲ့တဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ပြီး အတွေးကောင်း၊ အတွေးမြတ်များ ကိန်းအောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ စိတ်ရည်သန်လျက်.....။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုပြီး ရှိရာမှာ...
သာသနာတော်နှစ် ၂၃၈ ခုနှစ် (BC 306) မှာ ဗြဟ္မဇာလ သုတ္တန်ကြီး (မြတ်သောပိုက်ကွန်) ကို ဟောကြားခဲ့တယ်။
သာသနာတော်နှစ် ၂၃၁၂ ခုနှစ်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို သာသနာ တိတိကျကျ ရောက်လာတယ်။
ဒုတိယ သုတ္တန်ကို တင်ပါတယ်။
သုတ္တန်တွေထဲမှာမှ ဗြဟ္မဇာလသုတ်ကို အရင်ဆုံးတင်ပါတယ်။
စတဲ့ဆရာတော်တွေဟာ သုတဘုရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သမိုင်းနဲ့ အခြားဘာသာတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာရပါတယ်။
ဥပါလိ ဂါထာ (၁၀)ခု သိပ်လှတယ်။ ခက်လည်း ခက်တယ်။ ကမ္ဘာက သိပ်အံ့သြတယ်။
ရောဂါပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အဆိပ်ကိုကိုင်ကိုင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
တရားကောင်းဆိုတာ စ၊ လယ်၊ ဆုံး သုံးပါးလုံး ကောင်းရပါတယ်။
ဓမ္မကထိက (၄) မျိုး ရှိတယ်။
၁။ နည်းနည်းဟောတယ်၊ အကျိုးရှိတယ်။
၂။ နည်းနည်းဟောတယ်၊ အကျိုးမရှိဘူး။
၃။ များများဟောတယ်၊ အကျိုးရှိတယ်။
၄။ များများဟောတယ်၊ အကျိုးမရှိဘူး။
နံပါတ် (၁) နဲ့ (၃) ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ။
၂။ ကောင်းကောင်း မသိ။
၃။ သံသရာမှ မလွတ်မြောက်နိုင်။
၄။ ကိလေသာ ငြိမ်းအေးမှု မဖြစ်နိုင်။
၅။ ဘုရားမဟုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဟောပြောထား။
၆။ တည်ရာ မှီရာ မဖြစ်။
၇။ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးအတွက် မှီခိုအားထားရာ မဖြစ်။
သူများ မလိုချင်လို့ ပစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကို ကိုယ်က ဆီးပြီး ဖမ်းဖမ်းနေတာကို ပြောတာ။
နိဗ္ဗာနံ (နိဗ္ဗာန်) ဆိုသော စကားလုံးကို
(ကိလေသာများ ငြိမ်းအေးသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ)
သာသနာတော်ပြင်ပတွင် ဘယ်မှာမှ ရှာလို့မရဘူး။
၃၂၂၉ ကြိမ် ရှိတယ်။
စာအုပ်ပေါင်း ၁၅၇ အုပ်မှာ တွေ့နိုင်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာ ၈၃၇ ကြိမ် ရှိတယ်။
စာအုပ်ပေါင်း ၄၀ မှာ ဟောခဲ့တယ်။
ပါဠိတော် ၄၀ မှာ ၈၃၇ ကြိမ်တိုင်တိုင် နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ စကားကို ဟောခဲ့ပါတယ်။
May they listen to the Dhamma.
May they understand to the Dhamma.
May they practice to the Dhamma.
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၁၇)
Yahoo နဲ့ Chat မယ်….
ဒါ မြန်မာပြည်ကွဲ့… မင်းဘာသာမင်း အဌာရသ ၁၈ ရပ်ကို မိုးပျံအောင်ပဲတတ်နေပါစေ…
ဂွင်ရယ်… လမ်းကြောင်းရယ်… အထာရယ် သဘောမပေါက်လို့ကတော့ ဘိန်းမုန့်တောင် ဖုတ်ရောင်းလို့ မရဘူးမှတ်။
စကြာဝဠာကြီး ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်တောင် မင်းနာမည်စာလုံးလေးတွေက ကိုယ့်နှလုံးထက်မှာ မပျောက်မပျက်ဘဲ ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်…
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကို ကျောခိုင်းထားချင်တယ်….
အလွမ်းတွေကိုသာ ဆေးအဖြစ် သုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အာကာသထဲကနေ မင်းလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ မင်းနာမည်ကိုတောင် မြင်တွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:30 AM2Comment(s) Link This
အလွမ်းရာသီ - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:45 AM0Comment(s) Link This
After You - ဦးဘုန်း (ဓာတု-မန္တလေး)
Google Buzz မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။ သဘောကျလွန်းလို့ ပြန်လည်ဝေငှတာပါ။ ရွှေမန္တလေးဂျာနယ်၊ အမှတ် (၂၇၁) မှာ ပါတဲ့စာလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘဲ သူများတင်ပေးတာကို တစ်ဆင့်ပြန်ဖတ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခေါင်းစဉ်တွေ၊ နေရာတွေ ကွဲလွဲနေခဲ့ရင်၊ လွဲမှားနေခဲ့ရင် နားလည်ပေးကြဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေအားလုံး ဖတ်သင့်တယ်ထင်လို့ ပြန်လည်ဝေငှခြင်းသက်သက်ပါ။ အများစုက ဖတ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်ဖြစ်တော့ နောက်တစ်ခေါက် အတွေးကောင်းလေးတွေ ရနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အချို့သော စာလုံးပေါင်း အမှားလေးတွေနဲ့ စာကြောင်းအနေအထားတွေကို ပြင်လိုက်တာကလွဲလို့ Google Buzz မှာ ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ဝေငှပါတယ်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:40 AM 1 Comment(s) Link This
ရွှေကျောင်းဆရာတော် ဦးပညာ (မြန်မာ ၁၁၄၀-၁၂၀၀) ရေးသည်။
ရိုညွတ်ကြည်စွာ၊ မြတ်ဆရာ၌၊ မကွာထံပါး၊ ပျပ်ဝပ်တွားလျက်၊ တည်ကြားကြုံ့ကြုံ့၊ မယွင်းယုံ့လျှင်၊ နှုတ်တုံ့မလှန်၊ ပန်းသို့ပန်၍၊ နေဟန်ကျစ်လျစ်၊ ကြောက်ချစ်ရိုသေ၊ လုပ်ကျွေးထွေဖြင့်၊ မြုတေလျှံပြေး၊ ကျောက်ကောင်းသွေးသို့၊ ပြန်မေးပျော်မွေ့၊ မငြီးငွေ့ဘဲ၊ တစ်နေ့သုံးခေါက်၊ ၀င်ရောက်ခစား၊ ၀တ်ငါးပါးလည်း၊ မမှားကျင့်နေ၊ ပြည့်စုံစေမှ၊ ခွဲဝေစိတ်ဖန်၊ အတန်တန်ကို၊ မကျန်ထိုးထွင်း၊ သိစေလျင်းသော်၊ မယွင်းမချွတ်၊ ပုဒ်ပါဋ္ဌ်ဂါထာ၊ အလင်္ကာနှင့်၊ ကဗျာရတု၊ ဖတ်ရွတ်မူလည်း၊ ငါးခုရပ်ဋ္ဌာန်၊ ကာရန်ပိုဒ်ပြည့်၊ ဓိပ္ပါယ်ရှည်လျက်၊ မျှော်ကြည့်ဉာဏ်မြူး၊ သူ့ထက်ထူးအောင်၊ မလူးမလွန့်၊ စက်နှယ်ရွန့်၍၊ ကွန့်ကွန့်နှုတ်ဝယ်၊ ပြတ်စေမင်း။
လူရေးလူရာ၊ အဖြာဖြာ၌၊ လိမ္မာသိစေ၊ တတ်ကြောင်းဖွေ၍၊ မနေကြိုးကုတ်၊ အားအန်ထုတ်လျက်၊ မယုတ်စေထ၊ ၀ီရိယနှင့်၊ လုံ့လပင်ခိုင်၊ သံကျောက်တိုင်သို့၊ ခက်ဆိုင်ပညာ၊ ချိုမြတ်စွာသား၊ ချမ်းသာသီးပွင့်၊ ထူးထက်မြင့်တည့်၊ ထပ်ဆင့်ပွားလှောင်၊ သားထွေးမောင်လျင်၊ မရှောင်မပြေး၊ ကြိုးနှယ်ထွေးလော့၊ လက်ရေးလက်သား၊ စသည်များလည်း၊ မလျားမထောင့်၊ မမျှောင့်မယွင်း၊ မချွန်းမရှည်၊ မလည်မယိမ်း၊ မတိမ်းမငဲ့၊ မရွဲ့မစောင်း၊ မပျောင်းမယွတ်၊ မပွတ်မတွန့်၊ မလွန့်မထွတ်၊ မယှက်မမြှေး၊ မထွေးမပူး၊ မလူးမနွဲ့၊ မကျဲမစိတ်၊ မလိပ်မခွေ၊ တင့်ကြောင်းဝေမှ၊ အနေရှုအီ၊ ရွဲလုံးစီသို့၊ တညီသေချာ၊ အက္ခရာနှင့်၊ ရှေ့လာအမြစ်၊ အရစ်အပင့်၊ အဆင့်အတင်၊ အငင်အဆွဲ၊ တံခွန်ဝှဲလည်း၊ မလွှဲနှိုင်းညှိ၊ စက်ဖြင့်တိသို့၊ တရှိပုံတူ၊ တတ်ကြောင်းမူ၍၊ မြင်သူနှလုံး ဆွတ်စေမင်း။
လောကလူတွင်၊ လမ်းသို့ထင်သည်၊ ဂုဏ်အင်ပညာ၊ မရှိရှာက၊ စေပါလက်သုတ်၊ လွန်ညံ့ယုတ်သား၊ မှိတ်တုတ်မီးခဲ၊ မပြောင်ရဲသို့၊ ဖန်လဲခေါက်ခေါက်၊ သူ၏နောက်ဝယ်၊ ချွေးပေါက်ကျယို၊ ဖတ်ဖတ်စိုမျှ၊ သက်ဖိုပန်းပင်၊ မရွှင်ပြောင်းနွမ်း၊ တသမ်းသမ်းနှင့်၊ ၀န်ထမ်းလှေခတ်၊ ဖြစ်တို့တတ်ရှင့်၊ တမှတ်မယွင်း၊ ပညာကင်းက၊ ရွှေဟင်္သာလယ်၊ ဗျိုင်းသဖွယ်လျှင်၊ ပွဲလယ်မတ်လတ်၊ မလျှောက်မတ်ရှင့်၊ မြ၀တ်ဆံရည်၊ သို့ဖြစ်သည်ကြောင့်၊ အရှည်အတို၊ တတ်ထိုထိုဝယ်၊ ကော်ကျိုသောလား၊ မှုန့်မှုန့်တွားအောင်၊ ကြိုးစားမပျင်း၊ သင်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ ရှင်းလင်းသေချာ၊ အရာရာကို၊ လိုခါစမ်းတိုင်း ရစေမင်း။
မကောင်းမှုညစ်၊ သူမိုက်စစ်နှင့်၊ အချစ်ဖွဲ့ငြား၊ ပေါင်းယှက်မှား၍၊ ကျေထွားပျက်စီး၊ ထုံးတသီးလည်း၊ အစီးငါးရာ၊ လှည်းများစွာတွင်၊ ဘဏ္ဍာရောင်းဝယ်၊ ကုန်စလယ်နှင့်၊ အကျယ်ဉာဏ်အား၊ ရှေ့တည့်သွားသည်၊ ယောက်ျားလှည်းမှူး၊ ငရဲဘူးကို၊ ဘီလူးဖမ်းစား၊ ရွတ်ရွတ်ဝါး၍၊ လှည်းသားငါးရာ၊ တူမကွာလျှင်၊ ခန္ဓာပျက်ရှုံး၊ အသက်ဆုံး၏၊ နှလုံးကြွပ်ဆတ်၊ ဇာတသတ်ကား၊ ဒေ၀ဒတ်ကြီး၊ ခင်ပွန်းမီးကို၊ ထံနီးတစိ၊ ပေါင်းယှက်မိ၍၊ သက်ရှိစိုးရိမ်၊ ခန္ဓာငြိမ်လည်း၊ ပါယ်အိမ်ခေါင်းအုံး၊ မီးလျှံဖုံး၏၊ ရှေးထုံးလမ်းပြ၊ သာဓကကို၊ ယူဆမြော်ထောက်၊ ထိတ်လန့်ကြောက်၍၊ ထပ်လှောက်တုန်ဧ မြစေမင်း။
Labels ကဗျာ-Poem, စာအုပ်မှတ်စုများ, အောင်မြင်ရေး-Success
စွမ်းရည်ပြည့်ဝ ထေရ၀ါဒ - ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ္လ
အခုဖော်ပြမယ့်ပို့စ်ဟာ စာအုပ်ထဲက ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓမ္မစေတီဆရာတော်ရဲ့ တရားခွေတွေကို နာကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့တဲ့ မှတ်စုလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေငှတာပါ။ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ဟာ ဆရာတော်ဦးကောသလ္လဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားခွေရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် တစ်ခုခု အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်မှတ်ထားသလိုပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အတွေးကောင်း၊ အတွေးမြတ်များ ကိန်းအောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ စိတ်ရည်သန်လျက်.....။
စွမ်းရည် (၄)ရပ်နှင့် ပြည့်ဝသော ထေရ၀ါဒ
၁။ ပညာစွမ်းရည် (ပညာ)
၂။ ၀ီရိယစွမ်းရည် (၀ီရိယ)
၃။ အပြစ်မရှိတဲ့စွမ်းရည် (အန၀ိဇ္ဇ)
၄။ ချီးမြှောက်တဲ့စွမ်းရည် (သင်္ဂဟ)
အပြစ်မရှိပေမယ့် ကောင်းကျိုးမဖြစ်ရင် “ကုသိုလ်” မဟုတ်ဘူး။
အပြစ်မရှိဘူး.... ကောင်းကျိုးပေးရင် မှီဝဲရမယ့်တရား ဖြစ်တယ်....။
ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော နှစ်မျိုးလုံးကို သိရမယ်....
ပြီးမှ ကောင်းတာကို လုပ်ရမယ်....
စိတ်က (၂)ခုပဲ ဖြစ်တယ်။
1. I want to do good deeds.
2. I want to do evil deeds.
ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့ အကြောင်း (၅) ချက်
ဉာဏ် + ကာယကံ + ဉာဏ်
ဉာဏ် + ၀စီကံ + ဉာဏ်
ဉာဏ် + မနောကံ + ဉာဏ်
အဲဒီလို ပြု၊ ပြော၊ ကြံစည်တဲ့အခါ အပြစ်မရှိတော့ဘူး။
အလှူအားလုံးထဲတွင် ဓမ္မဒါနသည် အမြတ်ဆုံး။
ထပ်ခါထပ်ခါ တရားဟောမှုသည် ချစ်ဖွယ်စကားထဲတွင် အမြတ်ဆုံး။
အဲဒီလိုအလုပ်တွေကို လုပ်ပေးတဲ့သူဟာ သူများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်သူများတွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ရဟန္တာ - ရဟန္တာ အချင်းချင်း
ဆရာ - ဆရာ အချင်းချင်း
သမ္မတ - သမ္မတ အချင်းချင်း
လူ - လူ အချင်းချင်း
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆည်းကပ်ရင်/ စကားနားထောင်ရင် ဘေး (၅) မျိုး ကင်းတယ်။
၃။ ပရိသတ်ကို ကြောက်ရွံ့တဲ့ဘေး
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:15 AM0Comment(s) Link This
ဥပဒေသိက လူရေးလှ - ဦးကျော်ဇေယျ
မိန်းမတစ်ယောက်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက်ထက် ပိုယူခွင့် ရှိသလား။
မိန်းမအဖို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ထက် ပိုယူခွင့်မရှိပေ။ တရားဝင် လင်ရှိမယားတစ်ယောက်သည် အခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်၍ မဖြစ်ပေ။
မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန်နှင့် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြရန် နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ သာမန်ထွက်ပြေးရုံမျှနှင့် တရားဝင်ထိမ်းမြားခြင်း ဖြစ်သလား။
သာမန်ထွက်ပြေးရုံမျှနှင့် တရားထိမ်းမြားခြင်း မဖြစ်ပေ။
[၁၉၃၁၊ အေအိုင်အာရ်၊ ရန်ကုန်၊ စာ ၁၇၇]
လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းများကို လင်ဖြစ်စေ၊ မယားဖြစ်စေ တစ်ဦးဦး၏ ဆန္ဒမရရှိဘဲ ပေးကမ်းလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသလား။
လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းများကို လင်ဖြစ်စေ၊ မယားဖြစ်စေ ခင်ပွန်းသည်၏ ဆန္ဒမရဘဲ ပေးကမ်းလျှင် အဆိုပါ ပေးကမ်းသည့် ပစ္စည်းတွင် ပေးသူ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် အစုအတွက်သာ အတည်ဖြစ်ပေသည်။ သဘောတူညီချက်မပေးသည့် ခင်ပွန်းသည်၏ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိချေ။
သတင်းစာတွင် လင်မယားပြတ်စဲကြောင်း လင်ဖြစ်သူက ကြော်ငြာရုံဖြင့် လင်မယားပြတ်စဲခြင်း ဖြစ်သလား။
လင်မယားပြတ်စဲကြောင်း သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာကာမျှနှင့် လင်မယား ပြတ်စဲပြီဟု မဆိုနိုင်။
[ဦးကျော်ဇံ နှင့် ဒေါ်လှကြည်၊ ၁၉၇၆၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊ စာ ၅]
ဦးဝမ်တင်သည် မိမိခြံမှထွက်သော အုန်းလက်များ၊ သစ်ကိုင်းခြောက်များ၊ သစ်ခက်သစ်ရွက်များကို သာမန်အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် စီမံထားသည့် အမှိုက်ပုံတွင် စွန့်ပစ်ခြင်းသည် တားမြစ်ချက်ကို ကျူးလွန်ရာ ရောက်ပါသလား။
မည်သူမျှ ခြံထွက် အမှိုက်၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံထွက် အမှိုက်၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းထွက် အမှိုက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထွက် အမှိုက်၊ ဆေးရုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ဆုပ်ဖွယ် အရာများကို ကော်မတီက သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာမှအပ သာမန်အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် စီမံထားရှိသည့် အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်ကန်နှင့် အမှိုက်ပုံရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခြားနေရာတွင်လည်းကောင်း စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုရ။
[ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ ပုဒ်မ ၄၉]
တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:12 AM0Comment(s) Link This
Labels ဥပဒေသိက လူရေးလှ
ယော စ ၀ဿသတံ ဇီဝေ၊ ဒုပ္ပညော အသမာဟိတော။
ဧကာဟံ ဇီဝိယံ သေယျော၊ ပည၀န္တဿ ဈာယိနော။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:10 AM0Comment(s) Link This
ရှင်လူထွက်သစ် - ရှင်ငြိမ်းမယ်
ချစ်တဲ့သူငယ်လေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ယောင်းမတို့လေ၊ ရှင်လူထွက်သစ်၊ ဆယ့်သုံးနှစ်က၊ ချစ်တဲ့သူကို၊ အယူတခြား၊ မိထွေးများက၊ ဆီးတားဆို၊ ရစ်ကို ထောင်ကာထားရတယ်။
နွမ်းနယ်တစေ့၊ ရှေးကပါ ကြမ္မာငွေ့ကြောင့်၊ မတွေ့ရတာ၊ ကြာတောင်းကြာမှ၊ မျက်နှာတူရူ၊ သူလည်းအလာ၊ မယ်သာအမျှော်၊ နေ၀င်ကျော်၊ ဒွေးတော်အိမ်ပါး၊ တောင်ဆီနားသို့၊ ယာသွားပို့ပြန်၊ စောင်လျားခြံနှင့်၊ လက်ပံပင်ရှေ့၊ ကျဉ်းမြောင်းကွေ့ တွေ့သောခါ၊ ပုဝါယက်သစ်၊ မယ်ကပေးတဲ့၊ ပိုးသေးမည်းပါ၊ ခေါင်းပေါင်းပြာ၊ လည်မှာရစ်လို့၊ ဖွင့်လှစ်ကယ် မဆို၊ ပခုံးဘယ်တင်၊ မယ့်ကျောပြင်၊ လက်တင်ရပ်လို့၊ မတ်တတ်ကယ်ငို။
မောင့်ကိုစိမ်းကား၊ မယ်နှမက ဆိုသလား၊ တို့ချစ်ခြင်း ကွင်းအောင်တစေ၊ နေ့တိုင်းမွှေတဲ့၊ သက်ကြီးဝန်တို၊ မြင်တိုင်း မုန်းစရာ၊ ကုန်းမအို၊ ရေလို ခန်းခြောက်ပါစေသား။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:03 PM0Comment(s) Link This
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:00 AM0Comment(s)
အိပ်မက်အကျိုးပေးအဟော (မြင်ခြင်းစသည်ကို စွဲ၍မက်ခြင်းအဟော-၂)
အုန်းသီး၊ ထန်းသီး မြင်မက်သော် လာဘ်ရရာ၏။
ပုဆိုးဖြူ၊ ပန်းဖြူဝတ် မက်သော် သူကြီးဖြစ်ရာ၏။
ပချုပ်တွင်း၌ မီးတောက်သည်ကို မြင်မက်သော်၊ ဓား၊ လှံ အရောင်တောက်မက်သော် ကျွန်သားသော်လည်း တော်လှန်အံ့။ မတော်လှန်မူ အမတ်ဖြစ်ရာ၏။ အမတ်မူ မင်းဖြစ်ရာ၏။
ကိုယ်တွင် လောက်တက်မက်သော် ကျွန်၊ နွားများ ရရာ၏။
ငှက်ဖမ်းသည်ဟု မြင်မက်သော် ကျွန်၊ နွားများရအံ့။
နဂါးဖမ်းသည်ဟု မြင်မက်သော် သတ္တရုရန်ပျောက်အံ့။
အိမ်ရာထောင်သည်ဟု မြင်မက်သော် လာဘ်ကြီးစွာရအံ့။
တီ၊ မျှော့ တွယ်သည်ဟု မြင်မက်သော် သူကြီးဖြစ်အံ့။
ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်သည်ဟု မြင်မက်သော် ထင်ရှားအံ့။
စည်ကြီး၊ ကြေးနင်း၊ မောင်းခွက်၊ ခွင်း၊ ပတ်သာ၊ နရီ၊ ခရာ၊ ခေါင်းလောင်းသံကို ကြားရသည်ဟု မြင်မက်သော် နှစ်လိုဝမ်းသာ များအံ့၊ သတင်းကောင်းကြားအံ့။
မိုးကြိုးသံ၊ စည်သံ၊ ခရာသံ၊ နှဲသံကြားရသည်ဟု မြင်မက်သော် မင်းအမတ်ဖြစ်အံ့။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:05 PM0Comment(s) Link This
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:07 AM 1 Comment(s) Link This
ယော စ ၀ဿသတံ ဇီဝေ၊ ဒုဿီလော အသမာဟိတော။
ကာလတစ်ခုအတိုင်းအတာအထိ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ပြန်တင်ပေးနိုင်ဦးမယ် မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ စာဖတ်ချင်လို့ ရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာ့သွေးမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း တကယ့်ကို အားနာမိပါတယ်။ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း မပြုနိုင်ပေမယ့် ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တာလေးတွေ၊ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်တာလေးတွေကိုတော့ နည်းနည်းချင်း ဖတ်လို့ရအောင် စီစဉ်ထားပါရဲ့ဗျာ။
လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ခရီးသွားရမှာမို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ ခေတ္တခဏ ကင်းကွာနေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ့သွေးဘလော့ဂ်ကို ကာလတစ်ခုအထိ ပစ်ထားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလို ပစ်ထားရမယ့် ကာလတွေအတွင်းမှာ လူမရှိ သူမရှိနဲ့ ပိုးအိမ်စွဲ၊ ဖုန်တက်၊ ခြောက်ကပ် မဖြစ်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက်သုံးလို့ရတာနဲ့ ဘလော့ဂ်အတွက် ပို့စ်တွေ တင်ပေးဖြစ်မှာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွေးတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေထဲကတော့ ထုတ်နုတ်တင်ပြနိုင်မယ် မထင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် သွားရမယ့်နေရာမှာ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ရပါ့မလားဆိုတာ မသိသေးလို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း စာဖတ်သမားကနေ စာငတ်သမား ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
မြန်မာ့သွေးဘလော့ဂ်ကို ပုံမှန်လာရောက်ဖတ်ရှုကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်ရပါကြောင်းနဲ့ ယခင်ကလို မြန်မာ့သွေး ထမင်းဝိုင်းစားပွဲမှာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စုံစုံလင်လင် ဧည့်မခံနိုင်တဲ့အတွက် အားနာရပါကြောင်း တောင်းပန်လိုပါတယ်။
ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:05 AM4Comment(s) Link This
အိပ်မက်အကျိုးပေးအဟော (မြင်ခြင်းစသည်ကို စွဲ၍မက်ခြင်းအဟော-၁)
၁။ မိမိ၏ အူကိုထုတ်၍ ပြည်ပတ်မက်သော် တိုင်းပြည်အစိုးရသော ဘုရင်မင်းဖြစ်အံ့။ ၎င်းမိမိအူကိုထုတ်၍ ရွာကိုပတ်မက်သော် ရွာသူကြီးဖြစ်အံ့။ သူတကာတို့ထက် အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။
၂။ ကောင်းကင်၌ နေ၊ လ ကြတ်သည်ကို မြင်မက်သော် မင်းနှင့်တူသော သားကို ဖွားမြင်အံ့။
၃။ ဆင်းတုရုပ်ပွား တရားဟောသည်ကို ကြားရမက်သော် ကျော်စောအံ့။
၄။ ၎င်း ဘုရားသခင်ရုပ်ပွား ကြွသွားတော်မူသည်ကိုမက်သော် ဘုန်းကျက်သရေ တိုးအံ့။
၅။ တောင်ဖျားတက်မက်သော်၊ အရပ်လေးမျက်နှာကလာမက်သော် လာဘ်ရအံ့။
၆။ အသီးရှိသော သစ်ပင်ကိုတက်မက်သော် နောက်မှ ချမ်းသာရအံ့။
၇။ အမှုများသည်မက်သော်၊ ကျွဲနွားကြီးစွာမြင်မက်သော်၊ သူကောင်းချီမက်သော် အတုမရှိအောင် ကောင်းအံ့။
၈။ သူငယ်ချီမက်သော်၊ ရွှေငွေကို အစိုးရမက်သော် ချမ်းသာရအံ့။
၉။ ထီးဆောင်းမက်သော် ချမ်းသာရရာ၏။
၁၀။ အသီး၊ အရွက်နှင့် ပြည့်စုံသော သစ်ပင်မြင်မက်သော် ဥစ္စာများစွာ ရရာ၏။ ကျေးဇူးကြီးရာ၏။
အလွမ်းပင်လယ် - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ချစ်သူတွေ ဝေးနေရင် လွမ်းရမှာ…
ချစ်သူတွေ ဝေးနေရင် ဆွေးရမှာ…
ချစ်သူတွေ ဝေးနေရင် သတိရမှာ…
ချစ်သူတွေ ဝေးနေရင် ……………..
..… ….… ……
အလွမ်းပင်လယ် ရေပြင်ကျယ်မှာ ကူးခတ်ကြဦးစို့ရယ်…။
နံနက် ၂ နာရီ ၅၃ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 8:05 AM 1 Comment(s) Link This
အိပ်မက်အကျိုးပေးအဟော (စီးသည်ကိုစွဲ၍ မက်ခြင်းအဟော)
၁။ ထမ်းစင်သံလျှင်းစီးမက်သော် လာဘ်ရရာ၏။
၂။ ပုခက်စီးမက်သော် ထင်ရှားရာ၏။
၃။ မိကျောင်းစီးမက်သော် သတ္တရုရန်ကို နိုင်ရာ၏။ (မင်းဖြစ်ရာ၏လည်းဟူ)
၄။ သင်္ဘော၊ လှေစီးမက်သော် သူတကာထက် မြတ်သည်ဖြစ်ရာ၏။
၅။ ဆင်ဖြူစီးမက်သော် မင်သားကား မင်းဖြစ်ရာ၏။ သူကြီးသားကား အမတ်ဖြစ်ရာ၏။
၆။ နွားလည်ပင်းစီးမက်သော် ချမ်းသာရာ၏။
၇။ လှေစီးလျက် နစ်မြုပ်သည်မက်သော် မကောင်း။
၈။ လှေစီးမက်သော် ချစ်သာရရာ၏။
၉။ ရထားစီးမက်သော် မယားကောင်းရရာ၏။
၁၀။ ဖိနပ်စီးမက်သော် ဖျားနာရာ၏။
၁၁။ ငန်းမြွေစီးမက်သော် ဖျားနာရာ၏။
၁၂။ ပတ္တမြားစီးမက်သော် သားကောင်းရရာ၏။
၁၃။ ကျွဲစီးမက်သော် ကျွန်ရရာ၏။
စိန်မဟုတ်ကြောင်း သိလျက်နှင့် ထိုပစ္စည်းကို စိန်ထည်အဖြစ်ဖြင့် ပေါင်နှံခြင်းသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်သလား။
စိန်မဟုတ်ကြောင်း သိလျက်နှင့် ထိုပစ္စည်းကို စိန်ထည်အဖြစ်ဖြင့် ပေါင်နှံကာ တမင်လှည့်ဖြားပြီး ငွေချေးခြင်းသည် မရိုးမဖြောင့်သော သဘောနှင့် သွေးဆောင်ပြုရာရောက်၍ လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။
[ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၅]
မောင်ဖြူသည် သေစေရန် ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် လူသူမရှိသောအရပ်တွင် အသက်နုသောကလေးကို စွန့်ပစ်ထားသည်။ သို့သော် ကလေးမှာ မသေ။ ယင်းလုပ်ရပ်အတွက် မောင်ဖြူတွင် အပြစ်ရှိသလား။
ကလေးမသေစေကာမူ မောင်ဖြူသည် ဤပုဒ်မ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၇) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်သည်မည်၏။
[ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၇]
အိမ်တွင်းရှိလူကို နာကျင်စေရန်အကြံဖြင့် ပုလင်းတစ်လုံး ပစ်သွင်းခြင်းသည် မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြုလုပ်ရာရောက်သလား။
အိမ်တွင်းရှိလူကို နာကျင်စေရန်အကြံဖြင့် ပုလင်းတစ်လုံး ပစ်သွင်းခြင်းသည် မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြုလုပ်မှုမဟုတ်ဘဲ လက်ရောက်မှုသာ ဖြစ်သည်။
[အစိုးရ နှင့် ဘိုးတော၊ အတွဲ ၃၊ အောက်မြန်မာပြည်စီရင်ထုံး၊ စာ ၁၉၄]
Posted by Ko Nyan Posted Time 10:43 AM0Comment(s) Link This
လက်ဆောင် - ဖေမြင့်
အဘိုးကြီးတစ်ယောက် ပန်းလှလှတစ်စည်း ကိုင်လျက် လိုက်ပါလာသည်။ သူနှင့် လူသွားလမ်းခြားလျက် တစ်ဖက်ထိုင်ခုံမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထိုင်နေသည်။
ကောင်မလေး မျက်လုံးတွေက ပန်းတွေဆီပဲ တရစ်ဝဲ၀ဲ ဖြစ်နေသည်။
ခဏနေတော့ မှတ်တိုင်တစ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကား ရပ်သည်။
အဘိုးကြီးက အလျင်စလို ထကာ ပန်းစည်းကို ကောင်မလေးလက်ထဲ ထိုးထည့်သည်။ “ယူပါကွာ… မင်း ကြည့်ရတာ ပန်းသိပ်ချစ်ပုံရတယ်၊ မင်းကို ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း သိရရင် အဘဇနီးကလည်း ၀မ်းသာမှာပါ။ အဘ သူ့ကို ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်”
ကောင်မလေး ပန်းစည်းကို ယူလိုက်ပြီး အဘိုးကြီး ကားပေါ်က ဆင်းသည်ကို လိုက်ကြည့်နေသည်။ ဘတ်စ်ကား ရပ်သည့်နေရာက သုသာန်တံခါးဝအနီးမှာ ဖြစ်သည်။ သုသာန်ထဲသို့ အဘိုးကြီး ၀င်သွားတာ သူမြင်လိုက်ရသည်။
မူရင်း - Bennet Cerf ၏ The Gift
[ဖေမြင့်၊ နှလုံးသားအာဟာရ ရသစာများ၊ စာ-၅၉၊ ၆၀]
လူဝတ်ကြောင်တို့အတွက် နံနက်ခင်းသြ၀ါဒများ - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်
လောကမှာ အမှီအခိုဆိုတာ ရှိရတယ်။ တပည့်ဟာ ဆရာကို မှီခိုနေရတယ်။ သားသမီးများဟာ မိဘများကို မှီခိုနေရတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သံသရာသွားတဲ့အခါ တရားအမှီအခိုရှိမှ ကောင်းတယ်။ ဘ၀အမှီကောင်း ရှာရတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းကောင်းထားဖို့ရန် သူတော်ကောင်းကို မှီခိုဖို့ သိပ်လိုတယ်။ သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ မိကောင်း ဘကောင်း သားသမီးဖြစ်ဖို့ရန် နည်းနည်းလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ များစွာကို လိုတယ်။
ရှေးက ကောင်းလို့ ခုကောင်းပါတယ်၊
အခုကောင်း နောင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ရှေးက ဆိုးလို့ ခုဆိုးပါတယ်။
အခုဆိုး နောင် ဆိုးပါလိမ့်မယ်။
နောင်ကို ကောင်းဖို့ ခု ကောင်းလိုက်ကြပါစို့ကွယ်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:53 PM5Comment(s) Link This
ကျွန်တော်ဖတ်မိသော သတင်းများနှင့် တွေးမိသော အတွေးများ - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ပြန်ပေးဆွဲခံရသလိုလို သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေးအကြောင်းကလည်း ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဆိုသလိုပါပဲ။ ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုပြီး တိုင်ချက်ဖွင့်တယ်၊ နောက်တော့ ချစ်သူနောက် လိုက်ပြေးတာပါတဲ့။ ဖတ်ရ၊ ကြားရတဲ့လူတွေက သို့လော၊ သို့လောပေါ့လေ…။ ဟော… အခု နောက်ဆုံးအဲဒီမယ်တော်လေး ပြောတဲ့စကားကကြည့်ဦး။ ချစ်သူနောက်လိုက်ပြေးတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အမေနဲ့ စိတ်ကောက်ပြီး အဒေါ်အိမ်မှာ သွားပုန်းနေတာတဲ့။ တတ်လည်းတတ်နိုင်ပါပေ့ကွယ်။ အဒေါ်လုပ်သူကိုလည်း သူ့အမေ ဖုန်းဆက်ရင် မရှိဘူးလို့ ပြောပေးပါလို့ ပြောထားသေးဆိုပဲ။ အဒေါ်ကလည်း တူမစကားကို မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ရှာသားခင်ဗျ။ ဒီလောက် အုတ်အော်သောင်းနင်း၊ ဟိုးလေးတကြော်ကြော် ဖြစ်နေတာကိုတောင် မင်းသမီးလေးရဲ့အမေကို အကြောင်းမကြားဘဲ နေခဲ့သတဲ့လား။ အံ့…. အံ့ပါရဲ့ကွယ်။ အဲဒီသတင်းကို ဖတ်မိပြီး စိတ်တိုသလိုလို၊ ရယ်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ ဂျာနယ်မှာ ဆက်ရေးထားတာလေးကို ဖတ်မိပြန်တော့ ပြုံးမိရပြန်ပါရော။ အဲဒီ မင်းသမီးလေးဘေးမှာ သက်တော်စောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရှိနေတယ်တဲ့။ ဟားဟားဟား…. နောက်ဆိုရင် ဒါဟာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်သေးသဗျ။ "အမျိုးသမီးသက်တော်စောင့်" ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရိုက်လိုက်ရရင် ဟောလီဝုဒ်ကလူတွေ ငိုပွဲဆင်သွားကြမယ်ထင်ပါ့။ အင်း… မိုးမမြင် လေမမြင် မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ မင်းသမီးလေးရေ….။ တကယ့်ကို မိုးမမြင် လေမမြင်ပါပဲဗျာ။
၂၀၁၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားနဲ့ မင်းသမီးစုံတွဲကလည်း သတင်းမေးသူတွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဖြေနေတယ်ထင်ပ။ ထားပါလေ… အဲဒါက သူတို့အပိုင်း။ မင်းသမီးက အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်တဲ့။ ကောင်းတာပေါ့လေ။ အဲ… ဒါပေမယ့် ၁၈ နှစ် ၁၉ နှစ် မင်းသမီးငယ်လေးတွေနဲ့အပြိုင် သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေတာကတော့ နည်းနည်းများ လွဲနေသလားလို့ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ အမေခန်းတွေကို ကူးသွားလိမ့်မလဲရယ်လို့ စိတ်ဝင်စားမိပြန်ပါရောလား။ အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူတူလုပ်ရင်း မင်းသားလေးကို ချစ်မိသွားတာပါတဲ့။ မင်းသားလေးက ဖြေတာကတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်အတွက် ဗီစီဒီရိုက်ရင်း မင်းသမီးလေးကို ချစ်မိသွားတယ်ဆိုပဲ။ အဲ… ချစ်စကားပြောတာ၊ အဖြေတောင်းတာကိုတော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ပြောတာပါတဲ့။ ကဲ… ဘယ်လောက်များ ခေတ်မီလိုက်ကြသလဲ။ မင်းသားလေးရေ… ဂရေဟမ်ဘဲလ်ကို ထိုင်ပြီးတော့ ဦးချလိုက်သင့်တယ်နော်။
မြေအောက်မှာ ပိတ်မိနေရာက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ငရဲပြန် ချီလီမိုင်းတွင်းလုပ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လောင်းကြေးတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ သတင်းကလည်း တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားစရာခင်ဗျ။ ရယ်စရာလည်းကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် ဆိုချင်တာပါပဲ။ ဇာတ်ကားနာမည်ကို "၃၃" နဲ့ စမယ်ဆိုပြီး ဖွင့်တဲ့ကြေး၊ "အရှင်လတ်လတ် မြှုပ်နှံခံရ" ဆိုတဲ့ စာသားတွေ ပါ-မပါဆိုပြီး ဖွင့်တဲ့ကြေး၊ မိုင်းလုပ်သားခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဘယ်သူက သရုပ်ဆောင်မလဲဆိုပြီး ဖွင့်တဲ့ကြေး စသည်ဖြင့် စုံလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်သဘောကျတာက နောက်ဆုံးပိတ်ရေးထားတဲ့ စာသားလေးတွေပါ။ ဘာတဲ့….။ "အဲဒီအလုပ်သမား ၃၃ ယောက်ဟာ တွင်းထဲကို ရွှေရှာဖို့ ဆင်းသွားခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ပြန်တက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ ရွှေထက်ပိုပြီး အဖိုးထိုက်တန်တဲ့အရာကို သယ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ" တဲ့။ ကဲ… ဘယ်လောက်များ တွေးတတ်၊ ရေးတတ်လိုက်သလဲဗျာ။
ချီလီမိုင်းလုပ်သား ၃၃ ယောက်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမှ သန်း ၂၀ ကြား ကုန်ကျခဲ့တယ်တဲ့။ အင်း… တွေးစရာတွေ တစ်ပုံကြီးပေါ့ဗျာ။ ဒီဖြစ်ရပ်ရယ်၊ ဒီအလုပ်သမားတွေရယ်၊ ဒီပိုက်ဆံတွေရယ် စတာတွေကို ဆက်စပ်ကြည့်မိပြီး ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ဖြင့် တွေးလို့ကို မဆုံးနိုင်ပါဘူးဗျာ။ အဆိုတော်ကြီး ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ လေသံကို ခဏငှားပြီး သုံးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် "တွေးစရာတွေ တစ်ပုံကြီးကျန်သေးတယ်" ပေါ့ခင်ဗျာ။
ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို ဦးခေါင်းရိုက်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းသွားတဲ့ တရားခံကို ဖမ်းမိပြီဆိုတဲ့ သတင်းအတွက် ၀မ်းသာရပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို အုတ်နီခဲနဲ့ ထုရိုက်ပြီး ရှိတဲ့ငွေတွေ ယူသွားတယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်နေမိတယ်။ သူယူသွားတဲ့ပိုက်ဆံက ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျော်ကျော်လေးပါ။ အဲဒီပိုက်ဆံဟာ သူ့အတွက် တစ်လစာ ထမင်းဖိုးတောင် ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီငွေအတွက် လူတစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဦးခေါင်းကို အုတ်ခဲနဲ့ထုခဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ်ကို ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်း မသိတော့ပါ။ အခန့်မသင့်လို့ သေသွားခဲ့ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်ပါ့မလဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဟာ ငွေ ၅၀၀၀၀ လောက်တောင် မတန်တော့ဘူးလား။ သူများနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာသန်း ၂၀ နီးပါး အကုန်အကျခံပြီး လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူတစ်ယောက်က ငွေငါးသောင်းလောက်အတွက် ခေါင်းကို အုတ်ခဲနဲ့ထုတာကတော့ နည်းနည်းများ လွဲချော်မနေဘူးလားဗျာ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နားထဲမှာ နားရည်ဝနေတဲ့ လာရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ သီချင်းသံအချို့ကို အလိုလို ပြန်ကြားလာနေမိတယ်။ "ဟေ့ကောင်မလေး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ဟာ၊ အယဉ်ကျေးဆုံး တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ" တဲ့။
ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ကို ၀ယ်မယ်၊ မ၀ယ်ဘူး၊ ၀ယ်ပြီးပြီ၊ မ၀ယ်ရသေးဘူး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ရေးထားတဲ့ သတင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ အဲဒီဟိုတယ်ကို ရောင်းတာ၊ ၀ယ်တာ၊ အဲဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေက ပိုက်ဆံပြန်အမ်းတာယူပြီး စွန့်ခွာကြတာ စတဲ့အချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ ပိုက်ဆံရှိလို့ လိုချင်တဲ့ဟာ လျှောက်ဝယ်နေတာကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိပါ။ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုရင်တော့ အဲဒီဂျာနယ်မှာ ရေးထားတဲ့ အရေးအသားပုံစံကိုပါ။ စာနယ်ဇင်းဆိုတာ အလယ်ကလူကွ၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကွလို့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သတင်းရေးတဲ့လူရဲ့ ဒေါသသံတွေကို အဲဒီကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတွေက သိလား၊ မသိလားဆိုတာ မသဲကွဲပါ။ ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်ပရိသတ်ကတော့ ဒေါသသံတွေကို တနင့်တပိုး ခံစားလိုက်ရကြောင်းပါ။ သတင်းရေးသူခမျာ အမျိုးမျိုးပြောတတ်တဲ့ အဲဒီကုမ္ပဏီကို အတော်လေးကို ဒေါသထွက် စိတ်နာနေပုံ ရပါတတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
နံနက် ၁ နာရီ ၃၂ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:47 PM0Comment(s) Link This
အိပ်မက်အကျိုးပေးအဟော (သောက်သည်ကိုစွဲ၍ မက်ခြင်းအဟော)
၁။ နို့ကို ရွှေခွက်နှင့်ထည့်၍ သောက်မက်သော် လာဘ်ကြီးကောင်းစွာ ရရာ၏။
၂။ မြစ်ရေကို သောက်မက်သော် သူတကာတို့ထက် ကျော်စော ထင်ရှားရာ၏။
၃။ နွားနို့ သောက်မက်သော် ဥစ္စာများအံ့။ (သူတကာတို့အပေါ်၌ မိမိက ကျေးဇူးပြုရရာ၏လည်းဟူ)
၄။ သမုဒ္ဒရာရေ သောက်မက်သော် အလွန်ကောင်းစွ။
၅။ ပျားရည် သောက်မက်သော် ကြံသမျှပြီး၍ လာဘ်ကြီးရရာ၏။
၆။ နှမ်းဆီ သောက်မက်သော် ကြောင့်ကြစိုးရိမ်ခြင်း ပျောက်ကင်းရာ၏။
၇။ ရေ သောက်မက်သော် မင်းအရာရှိဖြစ်ရာ၏။
၈။ နို့ဟူသမျှ သောက်မက်သော် မင်းအရာရှိဖြစ်ရာ၏။
၉။ သေအရက် သောက်မက်သော် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြများရာ၏။ (လာဘ်ကြီးရရာ၏လည်းဟူ)။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:46 PM0Comment(s) Link This
အဘိဝါဒနသီလိဿ၊ နိစ္စံ ၀ုဍ္ဎပစာယိနော။
စတ္တာရော ဓမ္မာ ၀ဍ္ဎန္တိ၊ အာယု ၀ဏ္ဏော သုခံ ဗလံ။
သစ်ရွက်ပုံပြင် - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
နံနက် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:47 PM2Comment(s) Link This
အမွေပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကိတ္တိမ သားသမီးအဖြစ် မွေးစားရာတွင် အရပ်စာချုပ်ဖြင့် မွေးစားနိုင်သလား။
ကိတ္တိမ မွေးစားစာချုပ်ပြုလုပ်လျှင် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံမတင်မနေရ မှတ်ပုံတင်ရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ အဆန်ဘက်တွင်ရှိသော သွေးရင်းဆွေမျိုးများနှင့် အစုန်ဘက်တွင်ရှိသော သွေးဝက် ဆွေမျိုးများ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အမွေလုသော် မျိုးဆက်တူလျှင် မည်သည့်ဘက်က ရမည်နည်း။
မျိုးဆက်တူစေဦးတော့ အဆန်ဘက်မှာရှိသော သွေးရင်းဆွေမျိုးများက ရရှိသည်။
[မစ္စစ်ကတ်ဝု နှင့် မောင်ဆင်၊ အေအိုင်အာရ်၊ ၁၉၃၈၊ ရန်ကုန် ၇၄]
လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟူသော ကတိပြုချက်မပါဘဲ မိန်းမနှင့် ယောက်ျား နှစ်ဦးသဘောတူ ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးနောက် မိန်းမတွင် ပဋိသန္ဓေရှိလာရာ မိန်းမက ယောက်ျားအပေါ် လျော်ကြေးတောင်းခွင့် ရှိသလား။
ဤကိစ္စမျိုးသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကိုယ့်ကျင့်တရား ပျက်ပြားစေခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားသဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့်ကိစ္စတွင် တရားဥပဒေ၏ အကူအညီကို တောင်းဆိုရန်မသင့်။ နှစ်ဦးစလုံး ညီတူညီမျှ အပြစ်ရှိသူများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရုံးတော် အကူအညီကို မည်သူမျှ မရထိုက်။ တရားမျှတမှုကို လိုလားသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရမည်ဟူသော ရောမလူမျိုးတို့၏ ဆိုရိုးစကားကိုလည်း သတိချပ်သင့်ပေသည်။
[မောင်သန်းဌေး နှင့် မပု (ခေါ်) မသန်းရင်၊ ၁၉၆၆၊ မြန်မာနိုင်ငံ စီရင်ထုံး၊ ၁၀၂၁]
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:45 PM0Comment(s) Link This
ပုတ္တောဝါဒ ဆုံးမစာ (နှမက မောင်ကို ဆုံးမခန်း)
[အတုလဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် ဦးဉာဏ ရေးသည်။]
"ဤသို့သာယာ"၊ ပျားသကာလည်း၊ ပမာမမျှ၊ ချစ်နှမက၊ မောင်လှကိုသာ၊ လူရေးရာ၌၊ လိမ္မာစေလို၊ တစ်ဖန်ဆို၍၊ နားချိုမောင်လှ၊ မွေးဘမျက်စိ၊ မွေးမိမျက်တောင်၊ နှမမောင်၊ မောင်ငယ်ရင်သွေး၊ နာဘိသေးလော့၊ "ရှေးသရောအခါ ပြည်ဗာရာဝယ်၊ ကုဋေကြွယ်သား၊ သူဌေးအားလျှင်၊ သားတစ်ယောက်ဖြစ်၊ ချစ်၍တစေ၊ အိမ်မှာနေ၍၊ စာပေမကျ၊ မိဘစုတေ၊ ခန္ဓာရွေ့သော်၊ အရှေ့အနောက်၊ တောင်မြောက်ဘယ်မှာ၊ မသိပါငြား၊ သူဌေးသားသည်၊ သိုထားမတတ်၊ အရပ်ရပ်၌၊ နှံအပ်ဥစ္စာ၊ ရှိသည်ငှာကို၊ များစွာကျွန်ပေါင်း၊ မကောင်းခိုးသူ၊ ယူ၍ပြေးရှောင်၊ အိမ်ကိုရောင်း၍၊ ထောင်းထောင်းကျေလျက်၊ ခွက်လက်စွဲကာ၊ တောင်းစားပါလည်း၊ နင်သာလူမိုက်၊ ဒုစရိုက်ဟု၊ ရိုက်ပုတ်လိုက်ကြ၊ ရွာမှထွက်လေ၊ တောမှာသေသည်။ ကောင်သေလင်းတ ကျ၏တည်း။
အမောပြေ ဟာသလေးတွေ ဖတ်ကြပါဦး
[YOUTH-လူငယ် မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ-၅၊ အမှတ်-၁၁၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀၊ ဖိုးစွံ (အောင်ပင်လယ်) ၏ ရယ်ရွှင်မြူးကဏ္ဍမှ]
အိပ်မက်အကျိုးပေးအဟော (စားသည်ကိုစွဲ၍ မက်ခြင်းအဟော-၂)
၁၁။ ရွှေခွက်နှင့်ထည့်၍ ထမင်းစားမက်သော် လာဘ်ရအံ့။
၁၂။ အပုပ်စားမက်သော် လာဘ်ရအံ့။ ၎င်းအပုပ်စားပြီး အန်မက်သော် မကောင်း။
၁၃။ ထမင်းစားမက်သော် ရသောကျွန်ကြောင့် ဗျာပါကြီးအံ့။
၁၄။ မိကျောင်းသား စားမက်သော် လာဘ်ကြီးရအံ့။
၁၅။ လူသားစားမက်သော် ကျေးရွာ၊ ဆင်၊ မြင်း ရအံ့။
၁၆။ ချိုးသား၊ ကြက်သား စားမက်သော် လာဘ်ရရာ၏။
၁၇။ ငါးစိမ်း၊ သားစိမ်း စားမက်သော် မယား သူ့အိမ်တွင် နှံရရာ၏။
၁၈။ ကွမ်းရွက်၊ သစ်ရွက် စားမက်သော် ပုဆိုးကောင်းရ၏။
၁၉။ ကြက်စသော တိရစ္ဆာန် ခြေဖျား အတောင်အဖျားဟူသမျှကို စားမက်သော် ချမ်းသာရရာ၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:40 PM0Comment(s) Link This
ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား လက်က ကားရား ကားရား
ဆုတောင်းလို့ရတာ ရှိတယ်၊ မရတာ ရှိတယ်။ ဆုတောင်းလို့ ရတယ်ဆိုတာ ဥပမာ "မိမိက သမ္မာသမ္ဗောဓိ ဆုတောင်းထားရင် အဲဒီဆုနဲ့ လျော်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်မှလည်း တောင်းတဲ့ဆုအတိုင်း ရမယ်။ ဆုတော့ တောင်းပါရဲ့၊ ဆုတောင်းပြီး အပါယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေ လျှောက်လုပ်နေရင် မရနိုင်ဘူး။ "ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား၊ လက်က ကားရား ကားရား" ဆိုတာမျိုးလို မဖြစ်ကြစေနဲ့။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာ ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်ပါရမီတွေကို ဖြည့်ကျင့်ကြ၊ ဆည်းပူးကြ၊ အားထုတ်ကြ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တတ်အောင် ချစ်တတ်ကြရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တယ်ဆိုတာ လူဆိုလည်း မိမိတို့သီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြရတယ်။ ဘုန်းကြီးရဟန်း သာမဏေတွေဆိုလည်း မိမိသီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြရတယ်။ ဘ၀နာတရားကိုလည်း လက်မလွှတ်ရဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ရင် ချစ်တတ်အောင် နေတတ်ကြရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မချစ်တတ်ရင် သံသရာ နစ်ကြရဦးမှာ သေချာနေတာပဲ။
လူတွေက ရိပ်သာသွား တရားအားထုတ်ကြ၊ ဘုန်းကြီးက မသွားရဘူးလို့ မဆိုပါဘူး။ သွားရပါတယ်။ သွားပြီးတော့ စကားများနေတာကတော့ မကောင်းဘူး။ တကယ်တရားကို မိမိရရ အားထုတ်မှ ကောင်းတယ်။ ခုတော့ တချို့နေရာတွေမှာ ကြားနေရာတာက တယ်မကောင်းလှဘူး။ ဘုန်းကြီးက အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ လောဘ ဒေါသ နည်းအောင်လို့ အားထုတ်တာ၊ နည်းမှလည်း ကောင်းတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြိုင်ဆိုင်နေတာကတော့ မကောင်းဘူး။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:38 PM0Comment(s) Link This
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် စာဖတ်ခြင်း - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ဒီပို့စ်ကို ရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်က မနေ့ညက လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကြားခဲ့ရတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် အတွေးပွားခဲ့ရတာလေးတွေကို ဖွင့်အံချင်လို့ရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးတော့ နိဒါန်းပျိုးဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကြောင်းကို မပြောမဖြစ် ပြောရဦးမှာမို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ကျွန်တော် မြင်၊ တွေ့၊ ခံစား၊ တွေးမိသလို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ လက်ဖက်ရည်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မသောက်ရမနေနိုင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ညနေခင်း ထမင်းစားပြီးချိန်တွေမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မသွားရဘူးဆိုရင်တော့ နေမသိထိုင်မသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စကားဝိုင်းဖွဲ့ ပြောဆိုရတာ၊ ငြင်းခုံဆွေးနွေးရတာ၊ သတင်းတွေ၊ အသိပညာတွေ ဖလှယ်ရတာကို စွဲမက်ခုံမင်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကိုယ်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အခြားလူတွေသိအောင် တစ်ဆင့်ပြန်ပြောရတာ ကျွန်တော်နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောပြတဲ့အခါ ပြန်ကြားရတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ပိုမက်မောပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ကိုယ်မြင်တာနဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ အမြင်တွေ၊ မှတ်ချက်တွေ၊ ငြင်းခုံမှုတွေများ ကြားရတယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှကို ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ဘာလို့များ ငါ အဲဒီလို မတွေးခဲ့မိပါလိမ့်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေလည်း မရေနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော လူပေါင်းစုံရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အသိအမြင်တွေကို အမြဲမပြတ် သိခွင့်၊ ကြားခွင့် ရနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အတွက် အဖိုးတန်တာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေပဲ တွေးတာထက်စာရင် သူများတွေကရော ဘယ်လိုတွေးသလဲလို့ သိခွင့်ရတာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုလာဘ်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း အခြားသူတွေက မကြာခဏ မေးငေါ့တတ်ကြတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အချိန်ဖြုန်းခြင်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကြီးကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် စွဲစွဲမြဲမြဲ မက်မက်မောမော လုပ်ဖြစ်နေတာ ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီလိုပြောတဲ့လူတွေကိုလည်း အပြစ်မတင်ပါဘူး။ သူတို့အမြင်မှာလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာဟာ အချိန်ကို ဖြုန်းတီးနေခြင်းလို့ မြင်ကြမှာပါပဲ။ အဲဒီအချိန် တစ်နာရီအတွင်းမှာ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို ဖတ်နိုင်တယ်၊ တရားဓမ္မတစ်ပုဒ်ကို နာကြားနိုင်တယ်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို (ပန်းချီဆွဲတာ၊ စာရေးတာ၊ ကဗျာစပ်တာ၊ သီချင်းရေးတာ စသဖြင့်ပေါ့လေ) လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနိုင်တယ် စသဖြင့် တွေးကြမှာပါပဲ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပဲလေ။ အဲဒီအတွက် ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်တင်မနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုး။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ လောကအတွက် အကျိုးယုတ်စေမယ့် ကိစ္စမျိုးကို လုပ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ တားသင့်ရင် တားရမှာပေါ့လေ။
တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုကို ငြင်းဆန်ရှုံ့ချခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဟေးလေးဝါးလေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ လူငယ်တွေကို မြင်ရတိုင်း နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့သူ၊ မျက်စောင်းထိုးခဲ့သူပါ။ အခုတော့ အဲဒီလို မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ အချို့အချို့သော ဝေလေလေ လူငယ်တွေကို မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ မဆီမဆိုင် ဘေးကနေပြီး စိတ်တိုမိ၊ ဒေါသထွက်မိ နေသေးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တဲ့လူတိုင်းဟာ အားအားလျားလျား လေကုန်ခံပြီး အချိန်ဖြုန်းနေကြတာပဲဆိုတဲ့ အမြင်ကတော့ ပျောက်သွားပါပြီ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တဲ့လူတွေမှာ သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ ရှိကြသူတွေချည်းပဲလို့ မြင်မိပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ စောစောက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ ရှေ့နောက်မညီလိုက်တာလို့ ထောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့… ရှေ့နောက်ညီအောင် ရှင်းရရင်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ လူတွေမှာတောင်မှ အချိန်ကုန်ပြီးရောဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဟုတ်တာ၊ မဟုတ်တာကို ပြောလိုရင်းမဟုတ်ပါ။
တချို့တွေက လက်ဖက်ရည်သောက်၊ မုန့်စားရင်း ဗိုက်ထဲကို အစာဖြည့်ချင်လို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို လာကြတယ်။ အချို့တွေကျတော့ လက်ဖက်ရည်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မသောက်ရမနေနိုင်လို့ လာသောက်ကြတာ။ အချို့ကျတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို စုရပ်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပြီး အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ ရပ်ရွာရဲ့ သာရေးနာရေးကိစ္စတွေကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတာ။ အချို့ကျတော့လည်း အိမ်မှာဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းမို့ စကားပြောဖော်မရှိ၊ တိုင်ပင်စရာလူ မရှိတဲ့အတွက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တွေ့တဲ့လူနဲ့ အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောဆိုရင်း အထီးကျန်မှုကို ဖြေဖျောက်ကြတာ။ ကျွန်တော့်လိုမျိုး အချို့အချို့တွေကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ကုန်ကြမ်းရှာတဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပြီး ထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ။
အခုရေးနေတဲ့စာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပေမယ့် စကားစပ်မိတုန်းမို့ ပြောချင်လေးတစ်ခု ရှိသေးရဲ့ဗျာ။ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က စာရေးချင်သူဆိုတော့ စာရေးဖို့အတွက် မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ စဉ်းစားခြင်းပါပဲ။ ဘာအကြောင်းအရာကို ရေးရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရတာဟာ စာရေးတဲ့လူအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အင်မတန်မှ ကြုံတောင့်ကြုံခဲဆိုသလို တစ်ခုခုကို ချရေးရင်းနဲ့ မရည်ရွယ်ဘဲ လက်ကအလိုလို ရေးစရာတွေ ပေါ်လာတာမျိုးကို ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ကိုယ်ရေးမယ့် စာတစ်ခုကို စိတ်ကူးထဲမှာ အကြမ်းထည်ပြီးတဲ့အထိ စိတ်ကူးနဲ့ရေးကြည့်ပြီးမှ စာရေးရတာချည်းပါပဲ။ အခြားစာရေးသူတိုင်းလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှ စာတွေအများစုကို စိတ်ကူးမိတာ၊ ရေးဖို့အတွေးရတဲ့ အဓိကနေရာနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုပြောချင်တာပါ။ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ အိမ်သာပါ။
အဲဒီလိုပြောတော့ အချို့တွေက ရယ်ချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ မရယ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ အိမ်သာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စဉ်းစားခြင်းအမှုကို အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ပေးပြီး ပြုနိုင်စေတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ရင်းနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေကို ကြည့်နေရင်းနဲ့လည်း ရေးစရာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်ကယ်နဲ့အဖြတ်၊ ကားနဲ့အဖြတ်၊ မြင်းလှည်းနဲ့အဖြတ်မှာ ပြောသွားကြတဲ့ စကားတွေထဲက တစ်ခွန်းစ၊ နှစ်ခွန်းစကို အမှတ်မထင် ကြားလိုက်ရင်းနဲ့လည်း ရေးစရာကုန်ကြမ်း ရချင်ရတတ်တာမျိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေရင်းနဲ့ သူများတွေပြောတဲ့ စကားသံတွေကို နားထောင်ရင်း၊ သူတို့လှုပ်ရှားနေသမျှကို လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ရေးစရာတွေ တွေးမိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း မှာထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ခွက်က တစ်ကျိုက်မှ မသောက်ရသေးဘဲ အတွေးတွေ ရွက်လွှင့်ပြီး တမေ့တမော ထိုင်မိနေတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါရဲ့ဗျာ။
အိမ်သာတက်ရင်းနဲ့ စာရေးဖို့ အတွေးရတာ၊ စဉ်းစားမိတာ၊ အိမ်သာတက်ရင်း စာအုပ်တွေဖတ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဒီပို့စ်မှာ မရေးတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက် ရေးစရာဆိုပေမယ့် ဒီစာကို ဖတ်နေရတဲ့သူ အတွက်ကျတော့ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရော ဆိုသလို ဖြစ်နေမှာမျိုးကို မလိုလားလို့ပါ။ အဲဒီအကြောင်းကို သီးခြားရေးပါဦးမယ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကြောင်း ဆက်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသလောက် အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မရှိတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့ဆိုတာ ရှိမှရှိပါ့မလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျေးရွာတိုင်း စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိရမည်ဆိုတဲ့ စီမံချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို မြင်နေ၊ ကြားနေ၊ ဖတ်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေကို တွဲပေးလို့ မရနိုင်ဘူးလား ဆိုတာကိုပါ။
ကျွန်တော့်အတွေးက ဒီလိုပါခင်ဗျ။ စာဖတ်တာဟာ မကောင်းဘူးလား။ ကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာ။ ချွင်းချက်မရှိကို ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုစာပေတွေ၊ ညာလိုစာပေတွေ ဆိုတာမျိုးတွေ ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူး။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် ပြောနေတာပါ။ ကောင်းတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်တဲ့လူဟာ စာမဖတ်တဲ့ လူထက်တော့ သာတာအမှန်ပါပဲ။ ထားပါတော့ဗျာ။ ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် စာဖတ်တာဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ဖို့စာတွေ ကောင်းဖို့လည်း လိုသေးတာကိုးခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားကပြောလိမ့်မယ်။ ဒါများ ဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ဖတ်စရာ စာအုပ်ကောင်းတွေမှ အများကြီးပဲလို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ ဖတ်စရာ စာအုပ်ကောင်းတွေဟာ သေသွားတဲ့အထိ ဖတ်လို့မကုန်အောင် များပြားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ ဈေးနှုန်းကလည်း အင်မတန်ကောင်းတာကိုးဗျ။
ကျွန်တော်ပြောတာတွေက ပြောရင်းကနေ ဟိုရောက်လိုက်၊ ဒီရောက်လိုက် ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အစအဆုံး ဖတ်ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာတွေ၊ ကျွန်တော်တွေးမိနေတာတွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အရေးအသား ကျွမ်းကျင်လွန်းတဲ့ စာရေးဆရာ မဟုတ်လေတော့ အစီအစဉ်မကျ၊ အရေးအသားမပြေပြစ်၊ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ဖြစ်နေခဲ့ရင် အနည်းငယ် သည်းခံပြီးတော့ ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သေသေချာချာ တွေးမိတဲ့အရာ၊ ယုံကြည်တဲ့အရာကို ရေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ခံစားချက်ဟာ စာဖတ်သူရဲ့ ရင်ထဲကို Heart to Heart ရောက်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ရေးနေတာကို ဆက်ပါ့မယ်။
သိချင်စိတ်များနှင့် ပြည့်နေသော လူဆိုသည့်သတ္တ၀ါ
စောစောကပြောသလို လူတိုင်း စာဖတ်ကြပါ၊ စာဖတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင် ပြောရမယ်ဆိုရင် စာမဖတ်ချင်တဲ့လူ မရှိဘူးခင်ဗျ။ အဲဒီလိုဆိုတော့ အချို့က ငြင်းချင်ကြလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူကတော့ စာဖတ်တာကို လုံးဝကို ၀ါသနာမပါတာကွလို့။ ဟုတ်ကဲ့… ဒီလို စဉ်းစားရအောင်ပါ။ လူတိုင်းမှာ သူ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့သူတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဆိုပါတော့ဗျာ… လူပြိန်းကြိုက် ခပ်ပေါပေါဥပမာနဲ့ပဲ ပြောကြရအောင်ပါ။ ရုပ်ရှင် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူပဲ ဆိုပါတော့။ (ဒီလိုရေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို မေတ္တာတော်တွေ အတုံးလိုက်၊ အတစ်လိုက်၊ အထုပ်လိုက်၊ အထည်လိုက် ပို့သကြမှာကိုလည်း မျှော်လင့်ထားကြောင်းပါ။ ဤကား စကားချပ်) ဘယ်မင်းသားက ဘယ်မင်းသမီးနဲ့ ဘာဖြစ်နေတာတဲ့ ဆိုတာမျိုးကို သူစိတ်ဝင်စားမှာ အသေအချာပါပဲ။ အဲဒီလို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဟာ စာဖတ်ချင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကိုဉာဏ်ရာ… မင်းဟာကလည်း ရှုပ်နေတာပဲလို့ မတွေးပါနဲ့ဗျာ။ စောစောကလို သတင်းမျိုးကို စိတ်ဝင်စားတော့ အဲဒီသတင်းအကြောင်း သိတဲ့လူပြောတာကို သူနားထောင်မှာပါပဲ။ ပြီးရင် သူ့အမြင်၊ သူ့မှတ်ချက်၊ သူသိထားတာတွေကို ပြောမှာပါပဲ။ ဒါဟာ စာဖတ်ခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် စာဖတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူဖတ်တာကတစ်ဆင့် သူက ပြန်သိခြင်းပါပဲ။ တစ်ဆင့်ခံ စာဖတ်ခြင်းပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲ… အဲဒီလိုလူမျိုးကိုပဲ စောစောကသတင်းကို ရော့.. ဒီဂျာနယ်ထဲမှာ ဒီလိုရေးထားတယ်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဒီလိုပါတယ်ကွဆိုရင် အဲဒီလူဟာ သေချာပေါက် အဲဒီဂျာနယ်ကို လှန်ကြည့်၊ ဖတ်ကြည့်မှာ အသေအချာပါပဲ။ အသေးစိတ် ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် မဆုံးနိုင်တာမို့ ဒီအကြောင်းကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ပါရစေ။ ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာ အတန်ငယ်တော့ဖြင့် ရိပ်စားမိမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဘယ်လောက်ပဲ မအားလပ်တဲ့လူတွေ ဖြစ်နေပါစေ။ စာဖတ်တာကို ၀ါသနာပါသူချည်းပါပဲ။ ဥပမာတွေ နည်းနည်းပြောပါရစေ။ တစ်နေကုန် အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်နိုင်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဟာ အင်္ကျီတွေ မင်စွန်းသွားရင် ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲ၊ သံပုရာသီးကို အရည်ပိုထွက်အောင် ဘယ်လိုညှစ်ရမလဲ၊ အသားတွေကို အကြာကြီးခံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ၊ ဘုရားပန်းအိုးတွေ ကြေးညှိတက်နေရင် ဘယ်လိုတိုက်ချွတ်ရသလဲ၊ ၀မ်းကိုက်တာပျောက်ချင်ရင် ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဘယ်လိုအရွက်မျိုးကို စားနိုင်သလဲ၊ အသားတွေ မြန်မြန်နူးချင်ရင် ဘာထည့်ပြီး ချက်ရသလဲ စသည်စသည့်ဖြင့် သိချင်ကြသူချည်းပါပဲ။ တစ်နေကုန် ဖုန်းတစ်လုံး၊ ကားတစ်စီးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ပွဲစားလို လူမျိုးတွေကရော စာဖတ်တာ ၀ါသနာမပါဘူးလား။ ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဘယ်မြို့မှာ ဘာလေလံပွဲရှိတယ်၊ ဘယ်ကားဈေးက ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီ၊ ဘယ်မြို့မှာ ဘာလိုင်စင်တွေ ချပေးနေတယ်၊ ဘာဈေးနှုန်းကတော့ တက်သွားတယ်၊ ကျသွားတယ်၊ ရာသီဥတုကြောင့် စိုက်ခင်းအခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်၊ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းကြောင့် ဘာပစ္စည်းတွေ ဈေးနှုန်းပြောင်းသွားတယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်မှာလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်၊ ဒါဆိုရင် ဘာတွေအလားအလာ ကောင်းနိုင်တယ် စသည်စသည်ဖြင့် သိချင်ကြတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး ဆိုက်ကားနင်းနေတဲ့လူ၊ အငှားကားမောင်းနေတဲ့လူတောင်မှ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်ဘောလုံးပွဲရှိတယ်၊ ဘယ်ဘောလုံးသမားက ဒဏ်ရာရနေတယ်၊ ဘယ်အသင်းကတော့ ဘယ်သူ့ကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒီနေ့ကန်မယ့်ပွဲကို ဘယ်ဂျာနယ်က ဘယ်လိုခန့်မှန်းထားတယ် စသည်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားကြတာပါပဲ။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သမျှတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲဒီလို သိချင်တာတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်ကနေ ရယူနိုင်သလဲ။ စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှိပါတယ်။ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၊ အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုး၊ အတွေးအခေါ် အမျိုးမျိုး၊ ဗဟုသုတအမျိုးမျိုးဟာ စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို လူတိုင်းဟာ သိချင်စိတ်တွေနဲ့ ပြည့်နေကြတာဆိုတော့ အဲဒီလိုသိနိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ချင်စိတ် ရှိကြမယ်ဆိုတာ မလွဲလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောတာပါ။ လူတိုင်းမှာ စာဖတ်ချင်စိတ် (သိချင်စိတ်) ရှိကြပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် ဂျာနယ်တွေ သိပ်အဖိုးတန်တယ် (ဈေးကြီးတယ်)
ဒီနေ့ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းဟာ ၅၀၀ ၀န်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၁၅၀၀ ကျပ်ပဲ ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဂျာနယ်တစ်စောင် ၀ယ်ဖတ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်စဉ်းစားရမလဲဆိုတာ စာဖတ်သူပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ၁၀ ယောက်လောက်စုပြီး ၀ယ်ဖတ်ရင် အဆင်ပြေမှာပေါ့လို့ ပြောမယ့်လူတွေ၊ အကြံပေးမယ့်လူတွေ ရှိမှာပါပဲ။ အဲဒီဆယ်ယောက်ဟာ ၀ါသနာ ၁၀ မျိုးဖြစ်နေရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်ကြမတုန်း။ တစ်ယောက်က ဘောလုံး၊ တစ်ယောက်က အနုပညာ၊ တစ်ယောက်က ဈေးကွက်၊ တစ်ယောက်က နိုင်ငံရေး၊ တစ်ယောက်က သတင်းမှသတင်း၊ တစ်ယောက်က အလှအပ၊ တစ်ယောက်က နည်းပညာ၊ တစ်ယောက်က မှုခင်းသတင်း၊ တစ်ယောက်က ကျန်းမာရေး၊ ကဲ… မခက်ချေဘူးလား။ အဲဒါကြောင့်ပြောပါတယ်။ စာဖတ်တာကောင်းတယ်။ စာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေလည်း ကောင်းကြတယ်။ အဲ… ဈေးနှုန်းတွေလည်း ကောင်းကြတယ်လေ။ (ဒါတောင် ပိုက်ဆံရှိပေမယ့် ၀ယ်ဖတ်လို့မရတဲ့ နေရာတွေအကြောင်း မပြောသေးပါဘူး။)
အမေရိကန်သမ္မတကြီး လင်ကွန်းဟာ ဘယ်နှမိုင်ဝေးတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်တွေ သွားငှားဖတ်တယ်။ မြန်မာပြည်က အထင်ကရ စာရေးဆရာကြီးဟာ စာဖတ်ချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ၊ ဘယ်လိုဒုက္ခတွေကြားကနေ ခရီးအဝေးကြီးသွားပြီး စာဖတ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်ပညာရှင်ကြီးဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့ အချိန်အများစုကို စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ မြှုပ်နှံထားခဲ့တယ် စသည်ဖြင့် ပြောကြ၊ ဆိုကြ၊ ထောက်ပြကြ၊ ရေးသားကြမယ့်သူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့… သူတို့က သူတို့ပါခင်ဗျာ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ တစ်ပတ်လောက် အလုပ်မလုပ်ဘဲ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာချည်း သွားထို်င်ပြီး စာဖတ်နေလို့ရှိရင် အဲဒီလူဟာ ပညာရှင်ကြီး၊ သူဌေးကြီး၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်မဖြစ်တော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သေချာတာကတော့ တစ်ပတ်လောက် ဘာမှမစားဘဲ အာဟာရပြတ်ပြီး သေနိုင်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ပြီး ဘ၀တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြရတာပါ။ နေ့စဉ် အလုပ်မလုပ်တဲ့လူဟာ သူ့ဘ၀ရပ်တည်ချက်အတွက် ခက်ခဲစေတဲ့ အချိန်ကာလကြီးပါ။ ဒါဖြင့် ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတွေက စာဖတ်နိုင်တာပေါ့လို့ ပြောစရာရှိပါတယ်။ မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ ကျားကြီးရင် ခြေရာလည်း ကြီးတယ်လေဗျာ။
စာကြည့်တိုက်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဘယ်လိုကွာ
ကဲ… နည်းနည်းလေး ဆက်စပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ စာကြည့်တိုက်တွေမှာ အဖိုးတန်စာအုပ်တွေ၊ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွေ၊ အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ်တွေ၊ လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွေ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ စာစောင်တွေကို ဖတ်ချင်တဲ့အခါ အဲဒီနေရာကို သီးသန့်သွားရတယ်။ မှတ်ပုံတင်ရတယ်။ ဟိုဖြည့်ဒီဖြည့်တွေ ဖြည့်ရတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ဟိုပေးဒီပေးတွေလည်း ပေးရတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက စာကြည့်တိုက်တွေဟာ သွားချင်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်ဝင်သောက်ဖို့၊ မသောက်ဘူးဆိုရင်တောင် ခဏ၀င်ထိုင်ပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်ဖို့၊ တစ်ဆိုင်လုံး လူပြည့်နေရင်တောင် စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ နေရာလွတ်တစ်ခုခုမှာ ဒီနေရာမှာ ထိုင်ပါရစေနော်ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းပြီး ၀င်ထိုင်ဖို့ ၀န်မလေးကြပါဘူး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် တံခါးဖွင့်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ ခံယူထားကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ ဘယ်သူတွေထိုင်နေလို့ မသွားရဲဘူး၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲ အဲဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်တတ်ကြတာ စတဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်တွေ မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် တကယ့်ကို ပြောမနာဆိုမနာ ငယ်ပေါင်းရောင်းရင်း ဘော်ဒါကြီးလို့ ခံစားမှတ်ယူကြတာပါပဲ။
အဲ… စာကြည့်တိုက်တွေကျတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ သွားချင်စရာကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေ နည်းပါးနေတတ်တယ်။ အကြောင်းအချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ တသီးတခြား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီး နားလည်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆိုတဲ့အတွက် စာကြည့်တိုက်တွေကို စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ သဘောသဘာဝဟာ မတူကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ စာဖတ်ရတဲ့နေရာ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာက အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်။
ဆူညံလို့ စာဖတ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူး၊ စာတကယ်မဖတ်လို့ ဆူညံနေတာ
ဒါပေမယ့် အဲဒီအယူအဆက တစ်သက်လုံး ကျွန်တော်တို့ ခံယူလာခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်အဟောင်းကြီးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီအယူအဆကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ ငြိမ်သက်ပြီး သရဲခြောက်မတတ် တိတ်ဆိတ်နေရမယ် ဆိုတဲ့အယူအဆကို လက်မခံပါ။ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်၊ အေးအေးဆေးဆေးမှ စာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျွန်တော်လက်မခံပါ။ ရထားတွေပေါ်မှာ၊ မြေအောက်ရထားတွေပေါ်မှာ၊ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ ခရီးသွားရင်း စာမဖတ်ကြဘူးလား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စာမဖတ်ကြဘူးလား၊ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်က ဗုံးသံတွေ၊ သေနတ်သံတွေကြားမှာ စာမဖတ်ကြဘူးလား။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဖတ်နေတဲ့စာထဲမှာ တကယ်ပဲ အာရုံဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် အခြားသောအသံတွေဟာ အလိုလို အသံမဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးက တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ဒါဖြင့်ရင် စာဖတ်ခြင်းဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လို နေရာမျိုးမှာလည်း လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ပဲ။ စာဖတ်တာကို ဘယ်နေရာမှဖတ်မှ၊ ဘယ်လိုအနေအထားမှာဖတ်မှ၊ ဘယ်လိုအချိန်မှာဖတ်မှ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်မနေကြပါနဲ့။ အဲဒါတွေက အခွံအကာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်သာရက စာဖတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖတ်ဖတ် စာဖတ်ဖြစ်ဖို့ကသာ အဓိကပါ။
မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့ တွဲဖွင့်ရင်ဖွင့်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဘေးမှာ ဖွင့်လှစ်ရင် မကောင်းဘူးလား။ လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း သီချင်းနားထောင်မယ့်အစား စာကြည့်တိုက်က ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ဆွဲယူဖတ်ရှုနိုင်တာပေါ့။ ရသမျှအချိန်လေးမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တစ်ခုခုကို လေ့လာနိုင်တာပေါ့။ ငြင်းရင်းခုံရင်းနဲ့ ကိုးကားစရာလိုလာရင် ဘေးနားမှာပဲ အလွယ်တကူ ရှာဖွေပြောဆိုနိုင်တာပေါ့။ ကဲ… အဆင်မပြေဘူးလား။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က တကယ့်ဘော်ဒါကြီး၊ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာက ရတနာသိုက်၊ အဲဒီနှစ်ခု ပူးပေါင်းမိတဲ့အခါ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးလား။
အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပေါင်က အသားကိုတောင် လှီးထုတ်ရတယ်
တစ်ခါတလေမှာ စည်းကမ်းတွေ၊ ဘောင်တွေကို လျစ်လျူရှုသင့်ရင် ရှုရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ စည်းပျက်ကမ်းပျက် ဖြစ်လို့ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ဆိုပါတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေးမှာ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်တဲ့အတွက် စာအုပ်တွေ ပေရေကုန်မှာ၊ စည်းကမ်းမရှိသူတွေကြောင့် ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှာ စတာစတာတွေကို စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အတွေးဟာ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း စာဖတ်ကြစေချင်တယ်။ ဖတ်လို့ရအောင်လည်း ဖန်တီးပေးကြစေချင်တယ်။ ၅၀၀ ကျပ်တန် ဂျာနယ်တစ်စောင် ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတာထက် လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက်ဖြစ်စေ အဲဒီဂျာနယ်က အသိအမြင်တစ်ခုခု၊ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခု ရလိုက်တာက ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတယ်၊ တန်ဖိုးထားအပ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ မဆီမဆိုင်လို့ ဆိုရမလားပဲ။ တွေးမိတာတစ်ခုက မျက်နှာအစားထိုး ကုသတဲ့အခါ၊ လက်အစားထိုး ကုသတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ပေါင်ကအသားကိုလှီးပြီး အစားထိုးကုသတာကို သတိရမိတယ်။
နိဂုံးချုပ်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေက စာကြည့်တိုက်ဆန်လာတဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေ တွဲဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် စာကြည့်တိုက်တွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆန်လာပြီး မွေ့လျော်ပျော်မွေ့ဖွယ် ကောင်းတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လို့ ယုံကြည်နေမိကြောင်းပါခင်ဗျာ။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
နေ့လည် ၃ နာရီ ၁၇ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 4:12 PM 1 Comment(s) Link This
Labels ကျွန်တော့်အတွေးများ, ဆောင်းပါး-Article, အောင်မြင်ရေး-Success
Posted by Ko Nyan Posted Time 11:20 AM0Comment(s) Link This
မယားဆိုးလင် အိမ်မခင် (သို့မဟုတ်) မယားဂျီကျ လင်နေမရ
လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၇)၊ စာမျက်နှာ (၂၀) မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို သဘောကျလို့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ ခေါင်းစဉ်က "လင်နှင့်မယား အချစ်ပွား ဂျီတိုက်ခြင်းဖယ်ရှား" တဲ့။ ရွတ်လို့ဆိုလို့ကောင်းသလို ခပ်ဆန်းဆန်းလေးခင်ဗျ။ ရေးတဲ့လူက ဦးဟန်ညွန့် (ဥပဒေ) ပါ။ သူကလည်း သူဖတ်ခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြန်ညွှန်းထားကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ သူပြန်ညွှန်းတဲ့စာအုပ်က ဆရာချစ်စံဝင်း ရဲ့ "တူနှစ်ကိုယ်ချစ်" တဲ့။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ သူသဘောကျတာလေးတွေကို ထုတ်နုတ်ပြီး ရေးသားတင်ပြထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ကလည်း သူထုတ်နုတ်တင်ပြထားတဲ့အထဲကမှ ထပ်ပြီးတော့ ထုတ်နုတ်ပြီး (ထပ်ဆင့်ထုတ်နုတ်ပြီး) သဘောကျတာလေးတွေကို ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပြန်လည်ဝေငှလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါ။ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိသလို ပေးလိုက်ရခြင်းကို နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို မယားဆိုးလင် တအင်အင်လို့ ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲလို့ မေးလာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အမှန်အတိုင်းပဲ ပြန်ဖြေရတာပေါ့။ လင်ဆိုးမယား တဖားဖားတို့၊ သားဆိုးမအေ တပေပေတို့ စတာတွေကို အတုယူပြီး မယားဆိုးလင် တအင်အင်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။ အခုတော့ ပို့စ်နဲ့ သက်ဆိုင်မယ်ထင်ပြီး ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု စဉ်းစားမိတာကြောင့် အခု အဲဒီအတိုင်းပဲ ပြောင်းရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ကမ္ဘာကျော် ရုရှားစာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်စတွိုင်း ၏ အဖြစ်အပျက်
ဇနီးက မြည်တွန်တောက်တီးနေသဖြင့် အိမ်ကထွက်ပြေးဖို့ ကြံမိသော လင်သားယောက်ျားများ ရှိတတ်ပါ၏။ ဥပမာ - ကမ္ဘာကျော် ရုရှားစာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်စတွိုင်း ဖြစ်ပါ၏။
တော်စတွိုင်းနှင့် ဇနီးတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဥိး ညားခါစ အလွန်ချစ်ခင်စုံမက်၏။ ပစ္စည်းကလည်း ချမ်းသာ၊ ဂုဏ်ဒြပ်ကလည်း ရှိ၊ သူတို့ဇနီးမောင်နှံသည် လိုလေသေးမရှိ ဖြစ်ခဲ့၏။ အလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်၏။
တစ်ခါက တော်စတွိုင်းသည် မိမိရေးသားထားသော စာအုပ်များကို အဖိုးအခ မယူဘဲ ပုံနှိပ်ရန် ပေးလိုက်သောအခါ မိန်းမသည် သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ ဆူပူရာမှ တက်သွားခဲ့၏။ အတက်ကျသွားသောအခါ သူသည် ဘိန်းပုလင်းကိုကိုင်၍ သူ့ဟာသူ သတ်သေတော့မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်၏။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် မိန်းမသည် တော်စတွိုင်းအား နည်းပေါင်းစုံဖြင့် နားပူနားဆာ လုပ်တော့ရာ အိမ်ထောင်သက် (၄၈)နှစ်တွင် တော်စတွိုင်းသည် သူ့မိန်းမအား မျက်နှာချင်း မဆိုင်ချင်လောက်အောင် စိတ်နာနေတော့၏။ တော်စတွိုင်း အသက် (၈၂) သို့ ရောက်သောအခါ သူသည် ဇနီးမိန်းမ၏ နားပူနားဆာလုပ်မှု၊ ဂျီတိုက်မှုတို့ကို လုံးဝ ခံနိုင်စွမ်းရည် မရှိတော့ဘဲ အိမ်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့၏။ ထိုညက ဆီးနှင်းများလည်း ပြင်းထန်စွာ ကျလျက်ရှိရာ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်လာခဲ့သော တော်စတွိုင်းသည် အိမ်မှထွက်လာပြီး (၁၁)ရက် အကြာတွင် မီးရထားဘူတာရုံတစ်ခုတွင် အအေးမိကာ သေဆုံးသွားရှာ၏။
တော်စတွိုင်းက သေအံ့ဆဲဆဲတွင် နောက်ဆုံးမေတ္တာရပ်ခံသွားသော စကားတစ်ရပ်မှာ "ကျုပ်မိန်းမကို ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်ဆီကို ခေါ်မလာဖို့ပါပဲ" ဟူ၍ ဖြစ်ပါ၏။
အမေရိကန်သမ္မတကြီး လင်ကွန်း ၏ အဖြစ်အပျက်
ဂျီတိုက်မှုကို ဆရာကြီးတော်စတွိုင်း တစ်ဦးတည်း ခံခဲ့ရသည်မဟုတ်။ လင်ကွန်းဆိုသော အမေရိကန် သမ္မတကြီးသည်လည်း သူ့ဘ၀တွင် ဇနီး၏ အဆိုးဆုံးဂျီတိုက်မှုများကို ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါ၏။
လင်ကွန်း၏ ဇနီး မေရီတော့သည် ဂျီတိုက်ရာတွင် ပထမတန်းစားထဲ၌ ပါဝင်သော သမ္မတကတော်တစ်ယောက် ဖြစ်၏။ မေရီတော့က သမ္မတကြီးလင်ကွန်းအား ဘာမှ ဂျီတိုက်စရာမရှိလျှင် "ရှင်ဟာ… နားရွက်ကလည်း ကြီးနေသေးရဲ့၊ နှာခေါင်းကလည်း ကောက်၊ အောက်နှုတ်ခမ်းကြီးကလည်း တွဲကျပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဟာ ရှူနာရှိုက်ကုန်းသည်နဲ့ တူတယ်။ လက်တွေ၊ ခြေတွေက သိပ်ကြီးပြီး ခေါင်းကလည်း သိပ်သေးတာပဲ" စသည့် စကားများဖြင့် ဂျီတိုက်နေတတ်၏။
မေရီတော့သည် လင်ကွန်းနှင့် ညားပြီး၍ မကြာမီကာလ၌ လူအများ၏ရှေ့တွင် ကော်ဖီပူပူနှင့် မျက်နှာကို ပက်ဖူး၏။ မစ္စက်လင်ကွန်းသည် အစဉ်သဖြင့် ကျယ်လောင်သောအသံဖြင့် ဒေါသတကြီး အမြဲတမ်း ကြိမ်းမောင်းနေတတ်၏။ မစ္စက်လင်ကွန်းသည် ဒေါသထွက်လာပါက အော်ဟစ်ဆူပူရုံသာမက မကြာခဏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တတ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း လင်ကွန်းသည် ရှေ့နေလိုက်ရာ၌ တစ်နှစ်တွင် ခြောက်လလောက် အိမ်သို့ပြန်မလာဘဲ ဟိုတယ်များတွင် ဖြစ်သလိုတည်းကာ နေတတ်၏။ လင်ကွန်းသည် အလွန်ဝေးလံသော မြို့များမှ ရှေ့နေငှားသူတို့၏ အမှုများကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံ၍ လိုက်တတ်၏။ မိန်းမနှင့် ဝေးဝေးနေရလေ လင်ကွန်းအဖို့ သက်သာရာသက်သာကြောင်း ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ ထိုခေတ်က ဟိုတယ်များသည် တည်းခိုချင်စရာ မကောင်းလောက်အောင် အခြေအနေဆိုး၏။ လူများကလည်း မလွှဲသာမှ တည်းခိုတတ်ကြရာ လင်ကွန်းသည်လည်း မလွှဲသာသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့၏။ လင်ကွန်းက "နားပူနားဆာ လုပ်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးတို့အတွက် သူတို့အား အသည်းကွဲလောက်အောင် ချစ်ပါသည်ဟု ကတိပေးထားသော ယောက်ျားများက ထိုကတိကို ရုပ်သိမ်းကာ ယင်းတို့အနီးမှ ဝေးသည်ထက်ဝေးအောင် ထွက်ပြေးကြ၍ မိမိအား မရှုချင်၊ မမြင်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်ရသည်မှလွဲ၍ နားပူနားဆာလုပ်ခြင်းသည် အခြားအကျိုးကျေးဇူး ကြီးကြီးမားမား သိပ်မရှိလှပါ" ဟု ဆိုလေ၏။
Labels စာအုပ်မှတ်စုများ, ဗဟုသုတ-Knowledge, ဆောင်းပါး-Article, အောင်မြင်ရေး-Success
သတ္တိဆိုတာ - ဖေမြင့်
"အဲဒီတော့ ရှင်က ကျွန်မကို သတ္တိရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်ပေါ့"
[ဖေမြင့်၊ နှလုံးသားအာဟာရ ရသစာများ၊ စာမျက်နှာ-၄၁၊ ၄၂၊ ၄၃]
ကျန်းမာရေးအတွက် လက်ဆောင်စကား (၂) ခွန်း (ကျန်းမာရေးအသိအမြင်)
လူတိုင်း ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်စေချင်တယ်။ အရေးကြီးဆုံး စကားနှစ်ခွန်းလောက် လက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်။ ရှိသမျှဆေးဝါးတွေထက် ပိုပြီး ကောင်းတယ်။ ဘယ်လိုစကားနှစ်ခွန်းပါလဲ။
ထမင်းစားရင် ခုနစ်ပုံရှစ်ပုံ ၀ရုံလောက်ပဲ စားပါ။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ထမင်းဝိုင်းက ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နည်းနည်းလေး ဆာနေသေးတယ်။ ထပ်ပြီး စားချင်သေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ထမင်းဝိုင်းကနေ ခွာထွက်သွားရမယ်။ အဲဒါဟာ "ခုနစ်ပုံ ရှစ်ပုံ ၀ရုံ" ဆိုတာပါပဲ။
လှေကားတက်ပါ။ လမ်းလျှောက်ပါ။ အနှေးပြေးပါ။
ကိစ္စရှိလို့ သွားတာလာတာ လမ်းလျှောက်သွားပါ။ အပေါ်ထက်တက်တာ ဓာတ်လှေကားမစီးဘဲ ခြေလျင်လျှောက်တက်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး အားကစားနည်းဟာ လမ်းလျှောက်ခြင်းပါပဲ။ စင်စစ်အားဖြင့် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ သွေးတိုးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့။
[မောင်မောင်လှိုင် (အပ်စိုက်ကု)၊ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက် (၁၀၀)၊ စာမျက်နှာ-၃၉၊ ၄၀ မှ ပြန်လည်ထုတ်နုတ် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။]
၁။ သစ်သီးမှည့်၊ သခွားသီးမှည့် စားမက်သော်လည်းကောင်း၊ လက်သုပ်အမြိန်၊ အရသာ စားမက်သော်လည်းကောင်း၊ အုန်းသီး၊ ထန်းသီး စားမက်သော်လည်းကောင်း လာဘ်ရအံ့။
၂။ ရှောက်သီး၊ သံပုရာသီး စားမက်သော် သတ္တရုရန်ပျောက်အံ့။
၃။ မန်ကျည်းသီး စားမက်သော် သူကောင်းဖြစ်အံ့။
၄။ ငရုတ်၊ ချင်း စားမက်သော် သူတကာတို့ဆရာဖြစ်အံ့။
၅။ ဟင်းမျိုး၊ သားငါး စားမက်သော်လည်းကောင်း၊ အရွက်ဟူသမျှ စားမက်သော်လည်းကောင်း လာဘ်ရအံ့။
၆။ လိပ်၊ ငါး စားမက်သော် စပါး၊ ဆန်ရေများအံ့။
၇။ လိပ်ဥ၊ ဖွတ်ဥမှစ၍ ဥမျိုးမှန်သမျှ စားမက်သော် ဆင်းရဲသော်လည်း ကြွယ်ဝချမ်းသာဖြစ်အံ့။
၈။ မြေခဲ စားမက်သော် မင်းက လာဘ်ကြီးပေးအံ့။
၉။ သူကောင်စားမက်သော် စစ်သူကြီးဖြစ်အံ့။
၁၀။ ထမင်းစားမက်သော် လာဘ်ရအံ့။
Posted by Ko Nyan Posted Time 10:40 AM0Comment(s) Link This
ပုတ္တောဝါဒ ဆုံးမစာ (အဘက သားကို ဆုံးမခန်း)
"ပန်း၏ပမာ"၊ ဤလင်္ကာတွင်၊ မာတာပိတ၊ ဆိုဆုံးမသား၊ ထိုစကားကို၊ မှတ်သားကုန်ကြ၊ မိန့်လိုက်ပြအံ့၊ မွေးဘလက်ရုံး၊ မြပန်းကုံးသို့၊ နှလုံးဝမ်းက၊ ချစ်နိုးလှသည်၊ သားလှရွှေတောင်၊ ဘသည်းခေါင်၊ နားထောင်၍သာ၊ စေ့စေ့နာလော့၊ မိရာဘရည်၊ တည်မည်အကြောင်း၊ ကောင်းသားကျင့်ဝတ်၊ စာအတတ်ကို၊ သားမြတ်ယခု၊ တတ်ကြောင်းပြုလော့၊ ဗဟုသုတ၊ မရှိကမူ၊ နောင်တဆယ်ကြိမ်၊ ညှိုးပိန်မျက်နှာ၊ ပွဲမှာမ၀င်၊ ပြင်မှာမရောက်၊ တောမှာမျောက်သို့၊ ခြေထောက်လက်စုံ၊ ရှိပါတုံလျက်၊ လူပျက်လူနှမ်း၊ လူပေါက်ပန်းနှင့် လူသွမ်းလူပေါ့၊ ထဲသော့သော့ဟု၊ ကဲ့ရဲ့ပြုလိမ့်။ ညီပုရှက်မည်ထင်၏တည်း။
"ထို့ကြောင့်သားထွေး"၊ ငယ်ထွေးလေးက၊ လူရေးလူရာ၊ ရှိစိမ့်ငှာဟု၊ ကျောင်းမှာမြဲနေ၊ စာပေသင်သင်၊ သို့လျှင်သို့ဖတ်၊ သို့မှတ်သို့ရေး၊ သို့မေးသို့ဖြေ၊ သို့နေသို့ထိုင်၊ သို့ကိုင်သို့ကြွ၊ သို့ကွသို့ကုန်း၊ သို့သုံးသို့စွဲ၊ သို့လဲသို့ထား၊ သို့စားသို့သောက်၊ သို့လျှောက်သို့ဆို၊ သို့ကိုသို့ကျင့်၊ သို့နှင့်သို့လျှိုး၊ သို့ရှိခိုးဟု၊ မြတ်နိုးလှစွာ၊ ညီ့ဆရာက၊ မိန့်သမျှကို၊ ညီလှမင်းရွှေ၊ မမေ့စေနှင့်၊ စေ့ရေမွေးဘ၊ မှာသမျှကို၊ ညီလှရွှေနား၊ ချပ်ခါထား၍။ သည်းဖျားမှတ်စေချင်၏တည်း။
"သည်းဖျားမှတ်စိမ့်"၊ တဖန်မိန့်အံ့၊ နှစ်သိမ့်ဝမ်းသာ၊ ညီနားနာလော့၊ လူရွာလျှပ်ပေါ်၊ ရွှင်မြူးပျော်သည်၊ သူတော် မဟုတ်၊ လူယုတ်သူသောင်း၊ လူဗူးတောင်းနှင့်၊ မကောင်းမှုများ၊ နေ့တိုင်းပွားသည်၊ သောက်စားယစ်ဝ၊ လူ့ဗာလက၊ စသည်လူတွင်၊ လူလေဖင်နှင့်၊ ပျော်ရွှင်စကား၊ လူမိုက်များတို့၊ ပေါင်းညားရံခါ၊ နီးယှဉ်လာလည်း၊ ဝေးစွာသားလှ၊ ခွါနိုင်မှတည့်၊ သားလှကိုယ်ကျိုး၊ စုံပြည့်ဖြိုးလိမ့်၊ ကြိုးလေသားလှ၊ မှာသမျှကို၊ မချမြေ၀ယ်၊ အပယ်နှင့်ကား၊ ဘစကားကို၊ ရွှင်အားရ၍။ သားလှမှတ်စေချင်၏တည်း။
သွာနုတ္တသားသမီး ဖြစ်သည့်အချက် ထင်ရှားလျှင် မိဘအမွေ ဆက်ခံရန် ဆုံးရှုံးသည်ဖြစ်ရာ ယင်းဆုံးရှုံးမှုသည် မြေးများတိုင်အောင် အကျုံးဝင်သလား။
သွာနုတ္တသားသမီး ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားလျှင် မိဘအမွေ ဆက်ခံရန် ဆုံးရှုံးသော်လည်း အဆိုပါသားသမီးမှမွေးသည့် မြေးများသည် အဘိုးအဘွား၏ အမွေကို ဆက်ခံခွင့်ရှိသည်။
[ချန်ယူဂီး နှင့် မစ္စစစ်အိုင်းရစ်မောင်စိန်၊ ၁၉၅၃၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊ စာ ၂၉၄]
မုသားသက်သေခံရန် မောင်မောင်က မောင်ဘကို လှုံ့ဆော်သည်။ သို့သော် မောင်ဘက မုသားသက်သေ မပြု။ ယင်းအတွက် မောင်မောင်တွင် အပြစ်ရှိပါသလား။
မောင်မောင်သည် ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။ အပြစ်ရှိသည်။
လင်သည် မယား၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရဟန်းပြု (ဒုလ္လဘရဟန်းမဟုတ်) ပြီး လူပြန်ထွက်သော် လင်ခန်း မယားခန်း ပြတ်သလား၊ မယားစရိတ်ပေးရန် လိုသလား။
လင်သည် မယား၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရဟန်းပြုသည်။ (ဒုလ္လဘရဟန်းမဟုတ်) လေးနှစ်ကျော်သည့်အခါ ထိုသူ လူထွက်လာရာ မယားက မယားနှင့်ကလေးစရိတ်ရလိုကြောင်း လျှောက်ထားသည်။ ၎င်းအမှုတွင် ယောက်ျားသည် မယား၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လူ့လောကကို စွန့်ခွာရန် ရည်ရွယ်၍ ရဟန်းဘောင်သို့ ကူးဝင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လင်ခန်းမယားခန်း ပြတ်စဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မယားတွင် စားစရိတ်ရပိုင်ခွင့်မရှိ၍ ကလေးစရိတ်သာရသည်။
[မောင်ညွန့်တင် နှင့် မပု၊ ၁၉၅၄၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊ စာ ၇၆]
"ငါ သေရဦးမယ်၊ တစ်နေ့ သေရမယ်" ဆိုတာ အမြဲ သတိရှိကြ။ "မသေပါဘူး" လို့များ တွေးမထားနဲ့။ မလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းကို ရှောင်တိမ်းမနေချင်နဲ့၊ ရှောင်တိမ်းနေလို့လည်း မလွတ်နိုင်ပါဘူး။
သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကို ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ယူလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းကို မီးလောင်သွားရင် ပြန်ဆောက်လို့ရတယ်။ သာသနာ့ဝန်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး လျော့သွားလျှင် အစားထိုးဖို့ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီလို အဆောက်အအုံကောင်းဖို့ထက် ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဖို့ ပိုပြီးလိုအပ်တယ်။
သာသနာတော်ကို သူဌေးသူကြွယ်များက ကြည်ညိုရုံနဲ့ အရာမထင်နိုင်သေးဘူး။ တိုင်းသူပြည်သားက ကြည်ညိုမှ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် အရာထင်နိုင်ပါတယ်။ "အရာထင်တယ်" ဆိုတာကလည်း ဘုန်းကြီးတွေ အရာရောက်မှသာ အရာထင်နိုင်တာပဲ။ "အရာရောက်အောင်" ဆိုတာကလည်း လူတွေကို အကျိုးပြုပေးနိုင်မှ ရောက်မှာပဲ။
"အကျိုးပြုပေးမယ်" ဆိုတာ ၀ိနည်းတော်နဲ့ မထိခိုက်စေဘဲ ပညာသင်ပေးတာတို့၊ ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ရှေ့ဆောင်လုပ်ပေးတာတို့၊ အသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးတာတို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ မျက်နှာလို မျက်နှာရ အောက်ကျနောက်ကျ လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ သူများကလည်း တိုင်းရေးပြည်ရေးကို မျက်ခြည်မပြတ်ရသလို သာသနာရေးကိုလည်း လွှတ်မထားရဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံး ညီမျှမှ တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရောက် ယနေ့နိုင်ငံခြားသားတို့၏ မာယာပရိယာယ် - ဒေါက်တာထွန်းဝင်း
Posted by Ko Nyan Posted Time 2:57 PM2Comment(s) Link This
မိမိကိုယ်မိမိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း (ကျန်းမာရေး အသိအမြင်)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ၆၅ နှစ် မတိုင်မီဟာ လူလတ်ပိုင်း၊ ၆၅ နှစ်နဲ့ ၇၄ နှစ်ကြားကို လူငယ်သက်ကြီးရွယ်အို၊ ၇၅ နှစ်နဲ့ အသက် ၉၀ ကြားကျမှ တကယ့်သက်ကြီးရွယ်အိုလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် လူ့သက်တမ်းဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်ထိ ရှိသင့်သလဲ။ ဇီဝကမ္မရဲ့ မူရင်းသဘောအရဆိုရင် နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ "အရွယ်ရောက်ပြီးချိန်" ရဲ့ "၅ ဆ မှ ၇ ဆ" ရှိတယ်။ လူသားတွေရဲ့ အရွယ်ရောက်ချိန်ကို နောက်ဆုံးအံသွားပေါက်ပြီးချိန်၊ အသက် (၂၀-၂၅) နှစ်လို့ တွက်ချက်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့သက်တမ်းဟာ အတိုဆုံး အသက် ၁၀၀၊ အရှည်ဆုံး ၁၇၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အများသတ်မှတ်ထားတာကတော့၊ လူ့သက်တမ်းဟာ အသက် ၁၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဖြစ်ရင် ဒီသက်တမ်းကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်သင့်သလဲ။ ဒီသက်တမ်း ၁၂၀ အတွင်း၊ အသက် ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀၊ ၁၀၀ အရွယ်မှာ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ "အိပ်မက်" မဟုတ်ပါဘူး။
လူတိုင်း လူတိုင်း အသက် ၁၀၀ အရွယ်ထိ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိသင့်တယ်။ ဒါဟာ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေရဲ့ ပုံမှန်တရားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေကကော ဘယ်လိုရှိနေလဲ။ ပျမ်းမျှ အသက် ၁၂၀ ထိ ရှင်နိုင်လျက်သားနဲ့ (၇၀) ပဲ ရှိတယ်။ သက်တမ်း အနှစ် (၅၀) တိတိ လျော့နေတယ်။ အသက် ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀ အရွယ်မှာ သန်သန်မာမာ ရှိသင့်ပါလျက်နဲ့ လူအတော်များများဟာ အသက် ၄၀ မှာ မကျန်းမာတော့ဘူး။ (၅၀) မှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပြီး၊ အသက် (၆၀)မှာ သေရော။ နှစ်ပေါင်း (၅၀) စောပြီး ရောဂါရတယ်။ အခုလိုစောပြီး ရောဂါရတယ်။ စောပြီး ဒုက္ခိတဖြစ်ရတယ်။ စောပြီး သေဆုံးရတာဟာ ခုခေတ်ကာလမှာ သာမန်အခြင်းအရာတွေ ဖြစ်နေပြီ။
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်။ ၀င်ငွေတိုးပွားလာတယ်။ သုံးဆောင်ရတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာတယ်။ ဘာကြောင့် သက်တမ်းပိုပြီး တိုလာရသလဲ။ အချို့လူတွေကတော့ ခုခေတ်မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ၊ အဖုအကျိတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေ အဖြစ်များရတာဟာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကြောင့်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုံလုံကြွယ်ဝတာကြောင့်လို့ ဆိုကြတယ်။ မှားပါတယ်။ လုံးဝကို မှားပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေ ဖြစ်ရတာဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်လာတာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မမီလို့ရယ်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ချို့တဲ့လို့ရယ်ကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ရောဂါပိုမိုဖြစ်ပွားရတာဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာလို့ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အဆင့်အတန်းက လိုက်မမီလို့ပဲ ဖြစ်ရတာပါ။ တစ်ဖက်က တိုးတက်ပြီး တစ်ဖက်က မတိုးတက်ဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ဟာ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာအောင် စောင့်ရှောက်ရေးပညာကို မြှင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုပြီး ကျန်းမာလာရမယ်။ ပိုပြီး ရောဂါဘယ ဖြစ်ပွားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးစွာခံယူရမှာက ရောဂါပိုမို ဖြစ်ပွားလာရခြင်းဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ တိုးတက်ပေါကြွယ်လာလို့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးပညာက လိုက်မမီလို့ ဖြစ်ရတာဆိုတာပါပဲ။
[မောင်မောင်လှိုင် (အပ်စိုက်ကု)၊ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက် (၁၀၀) မှ ပြန်လည်ကောက်နုတ် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။]
အစိုးရတို့၏ အာဏာသုံးရပ်ကို ပိုင်းခြား၍ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့၏ သဘောတရားမှာ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဥပဒေပြုအာဏာ၏ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုကို ရလိုမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သော ခုခံမှုများကြားမှ ဥပဒေပြုအာဏာက လုပ်ရသော အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုသည် ဥပဒေပြုအာဏာ၏ အနှစ်သာရလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ဥပဒေပြုအာဏာအတွင်း ရောက်ရှိသွားသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအနေဖြင့် မိမိထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ကိုလည်း နားလည်ပြီး အခြေခံဥပဒေ ပေးထားချက်များကိုလည်း သဘောပေါက်ပါက တစ်မျိုးသားလုံး၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် ပါးနပ်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပေါ်ပေါက်မည့် လွှတ်တော်များက ထမ်းဆောင်ပေးရမည့် အရေးတကြီး တာဝန်အများစုမှာ သဘောထား ကွဲလွဲစရာမရှိဘဲ တစ်မျိုးသားလုံး၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် အားလုံးက သဘောတူနိုင်သော ကိစ္စရပ်များသာဖြစ်ရာ စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးရောင်းချနိုင်သည်နှင့်အမျှ တိုးတက်အောင်မြင်မှုများလည်း မြင်တွေ့ရမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသည်မှာ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှု Check and Balance ပြုလုပ်သည်ဆိုခြင်းမှာ အရာရာ အတိုက်အခံလုပ်ရသည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပြောရသည်ဆိုသော သဘောမဟုတ်ပါ။ ပေးပါမည်ဟု ပြောထားသော ကတိစကားအတိုင်း မလွဲမသွေရရှိအောင် ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်လျှင်ပင် ပြည်သူလူထုအတွက် လွှတ်တော်များက ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သော ကောင်းကျိုးများစွာ ရှိနေသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ မြင်တွေ့နေကြသော နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံဆိုသော သဘောတရားနှင့် ယနေ့လွှတ်တော်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားတော့မည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ သဘောသဘာဝမှာ များစွာ ကွာခြားသွားသည်ကို မကြာမီ ပြည်သူလူထု မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတော့မည် ဖြစ်သည်။ ယခင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံများသည် လွှတ်တော်ထဲသို့ မရောက်သော လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးကိုသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု မြင်တွေ့ရမည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများသည် လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေးကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရကြသည်ဖြစ်ရာ သဘောသဘာဝချင်း လုံးဝကွာခြားသွားတော့မည် ဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးနှင့် လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးတို့၏ ကွာခြားမှုကို မြင်နိုင်လျှင် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ထက်မြက်ပါးနပ်သည်နှင့်အမျှ ရလဒ်ကောင်းများကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးဖော်ပြလိုပါသည်။
[The VOICE Weekly ဂျာနယ်၊ အတွဲ-၆၊ အမှတ်-၄၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈-၂၄၊ ၂၀၁၀၊ စာမျက်နှာ-၄၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော်]
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:03 PM0Comment(s) Link This